ညဆို – မြန်မာသတင်းစုံ
စာက်ကောင်မ..ပါးစပ်ပိတ်ထား…မောင်မောင်မျိုးလင်း..ကောင်မကြီးကို တခြား အခန်းကို ခေါ်သွားလိုက်စမ်း…. အဲဒီမှာ ဖင်လိုးလိုက်…” လို့ အော်ပြောလိုက်သည် ။ မောင်မောင်မျိုးလင်းက “ အိုကေ….ကိုကျွဲကြီး….ကျုပ် ကောင်းကောင်း ဖြုတ်ပေးလိုက်မယ်…..” လို့ ပြောရင်း ဒေါ် မွှေးမွှေးရဲ့ လည်တိုင်ကို ဓါးနဲ့ တေ့ထောက် ဒေါ်မွှေးမွှေးရဲ့ လက်ကို ဆွဲပြီး တဖက်ခန်းဖက်ကို ဆွဲခေါ်သွားသည် ။ “ ကျုပ် တကယ် ထိုးထည့်လိုက်မှာနော်….သေသွားမယ်…အေးအေးဆေးဆေး…လိုက်ခဲ့…” စားပွဲပေါ် မှောက်ကုန်းနေရတဲ့ နော်ပိုးရဲ့ ခြေထောက်တွေကို ကျော်ထဲက သူ့ခြေထောက်တွေနဲ့ ဘေးကို တွန်းခွဲ လိုက်သည် ။ ပြီးတော့ နော်ပိုးရဲ့ ထမိန်လေးကို ဆွဲလှန်လိုက်သည် ။ နော်ပိုးက ထမိန်ကို ဆွဲဖုံးဖို့ ကြိုးစားပေမယ့် ကျော်ထဲက သူမကျောပြင်ကို လက်နဲ့ ဖိတွန်းထားလို့ ဘာမှ လုပ်လို့ မရ ။ ထမိန်လေး ခါးအထိ လန်တက်သွား ရပြီး ဖြူဖွေးတဲ့ နော်ပိုးရဲ့ အောက်ပိုင်း အလှအပတွေ ထင်းထင်းကြီး ပေါ်သွားသည် ။ စွင့်ကားလုံးနေတဲ့ တင်ပါး အိအိတွေ နဲ့ ပေါင်တန်ရှည် ဖြူဖြူဖွေးဖွေးတွေ….ပြီးတော့ ဖင်ကြားက အမြောင်းလိုက် ထွက်နေတဲ့ စောက်ဖုတ် ။ “ အဟား…စောက်မွှေး ပြောင်အောင် ရိပ်ထားပါလား….လှလိုက်တဲ့ စောက်ကတုံးလေး….ဟီး……” ကျော်ထဲရဲ့ လက်က နော်ပိုး စောက်ဖုတ်ဆီကို ရောက်သွားသည် ။ သည်အချိန်မှာ အိမ်အပြင်ဖက်က ချောင်းနေတဲ့ အောင်ကောင်းသော်လည်း အိမ်အနောက်ဖက်က တဲလေးထဲမှာ ကြိုးတုပ်ခံထားရတဲ့ ခြံစောင့်အဖိုးကြီး ဆီကို ရောက်သွားသည် ။ ပထမဆုံး အဖိုးကြီးရဲ့ ပါးစပ်ထဲမှာ ဆို့ထားတဲ့ စွပ်ကြယ်စုတ်ကို ဆွဲထုတ်ပေးလိုက်သည် ။
ပြီးတော့ ခြေနဲ့လက် တွေကို တုပ်ထားတဲ့ ကြိုးတွေကို ဖြေပေးလိုက်သည် ။ “ ကျေးဇူးပါဘဲကွာ..မင်းက ဘယ်သူတုံး…” “ ဦးလေး…ကျနော်က ရဲအုပ်တယောက်ဘဲ..အိမ်ထဲမှာ လူဆိုးတွေ ရောက်နေပြီ …ဦးလေး အပြင်ထွက်ပြီး ရဲကို အ ကြောင်းကြား အကူတောင်းပေးပါလား…ကျနော်ကတော့ အထဲက လူဆိုးတွေကို နှိပ်ဖို့ လုပ်လိုက်အုံးမယ်…” “ အေး..အေး….ကျုပ် သွားလိုက်မယ်…..” အဖိုးကြီး မိုးရေထဲ အမှောင်ထုထဲ ပျောက်ကွယ်သွားတော့ အောင်ကောင်းသော်လည်း အိမ်ကြီးဆီကို ပြန် ချဉ်းကပ် လိုက်သည် ။ မီးလင်းနေတဲ့ ပြူတင်းပေါက်ကနေ အထဲကို ပြန်ချောင်းကြည့်လိုက်သည် ။ အိမ်ဖေါ်မလေး နော်ပိုးသည် ထမင်းစား စားပွဲကြီးပေါ်မှာ မှောက်ကုန်းထားနေရပြီး အနောက်ကနေ ကျော်ထဲ ဆိုတဲ့ကောင်က ဒူးထောက် ထိုင်ချရင်း ဖင်ကြားက ပြူးထွက်နေတဲ့ စောက်ဖုတ်ကို လျာကြီးနဲ့ ယက်နေတာကို တွေ့လိုက်ရသလို ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်နေရတဲ့ ဒေါ်မွှေးမွှေးရဲ့ သမီးချောလေး နှစ်ယောက်ကို ပါးစပ်ဟခိုင်းပြီး ကျွဲကြီးက သူ့မဲမဲတုတ်တုတ် တန်ဆာချောင်းကြီးကို ထိုးသွင်းဖို့ ကြိုးစားနေသည် ။ အောင်ကောင်းသော်လည်း ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ ချီတုံချတုံ ဖြစ်နေသည် ။ ညာလက်နဲ့ သေနတ်ကို တင်းတင်း ဆုပ်ကိုင်ထားပြီး အထဲဝင်ပြီး သေနတ်နဲ့ ချိန် ဖမ်းလိုက်ရမလား…စဉ်းစားနေသည် ။ မိုးကတော့ စဲသွားပြီ ။ လျှပ်စီးတွေကတော့ လက်နေဆဲ ။ သည်အချိန်မှာ အောင်ကောင်းသော်ရဲ့ ခေါင်းကို တစုံတယောက်က လေးလံမာကျောတဲ့ အရာဝတ္ထု နဲ့ ထုချလိုက် လို့ အောင်ကောင်းသော် အော်တောင် မအော်နိုင်ဘဲ မြေကြီးပေါ်ကို မှောက်ရက် လဲကျသွားသည် ။ “ ခွေးသား..မင်းက ဘယ်သူလဲ….” ဆိုတဲ့ အသံကို ကြားလိုက်ရပြီး သူ့နံကြားကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကန်လိုက်တာ ကိုလည်း ခံလိုက်ရသည် ။
“ ဟင်….သေနတ်…..မင်း..မင်း….ရဲလား….” အနောက်က တိုက်ခိုက်သူက အောင်ကောင်းသော်ရဲ့ လက်ထဲက လွတ်ကျသွားတဲ့ ခြောက်လုံးပြူး သေနတ်ကို ကောက်ယူလိုက်သည် ။ ပြီးတော့ သေနတ်ပြောင်းနဲ့ အောင်ကောင်းသော်ရဲ့ ခေါင်းကို ရိုက်သည် ။ ဒင်နဲ့လည်း ထုသည် ။ “ ခွေးသားပုလိပ်….မင်း ဘယ်လို ရောက်လာတာလဲ…..” ကျွဲကြီးလည်း ငြင်းဆန်နေတဲ့ ပြာဇင်ရဲ့ ပါးစပ်လေးထဲကို သူ့တန်ဆာတုတ်တုတ်မဲမဲကြီးကို အတင်း ထိုးသွင်းနေ တဲ့အချိန် တံခါး ကျွီကနဲ ပွင့်လာပြီး လူတယောက်ကို အင်္ကျီလည်ဂုတ်ကနေ တရွတ်တိုက် ဆွဲသွင်းလာတဲ့ မောင်မောင်မျိုးလင်းကို တွေ့လိုက်ရသည် ။ “ ဟေ့ကောင်..သူက ဘယ်သူလဲကွ…” “ ဒီကောင် ပုလိပ် ဖြစ်မယ်…သေနတ်လည်း ပါတယ်…ဘယ်ရမလဲ..အနောက်ကနေ အုတ်ခဲနဲ့ ထုပြီး ရေလည် နှိပ် ပစ်လိုက်တယ်….” လို့ မောင်မောင်မျိုးလင်းက ဂုဏ်ယူစွာနဲ့ ပြောလိုက်သည် ။ ကျွဲကြီးလည်း ပြာဇင်ကို ကြမ်းနေရာကနေ ကြမ်းပေါ်မှာ မှောက်ရက် ညည်းငြူနေတဲ့ အောင်ကောင်းသော် ဖက်ကို လှည့်လိုက်သည် ။ “ ဒီကောင့် အိတ်ကပ်တွေကို ရှာလိုက်….” မောင်မောင်မျိုးလင်းက ကျွဲကြီးက ဆရာကြီးလုပ် အမိန့်ပေးနေတာကို မကြိုက်တဲ့ ပုံနဲ့ ဆတ်ကနဲ မော့ကြည့်လိုက်ပြီး…“ ကိုကျွဲ..ခင်ဗျား ဆရာ သိပ်လုပ်တယ်ဗျာ….ကိုယ့်ဖါသာ ရှာပေါ့..ဘာလို့ လာခိုင်းနေတာလဲ..” လို့ ပြန်အော်ပြောလိုက်သည် ။ ကျွဲကြီးလည်း မောင်မောင်မျိုးလင်းကို ဒေါသတကြီးနဲ့..“ မင်းက ခိုင်းတာ မလုပ်ဘဲ ဘာလို့ ပြန်ဟောင်နေတာလဲ မင်းက ဘာကောင်လဲ..” လို့ အော်သည် ။ မောင်မောင်မျိုးလင်းက အောင်ကောင်းသော် ဆီက ရထားတဲ့ ခြောက်လုံးပြူးသေနတ်ကို အဆင်သင့်ကိုင်ထားရင်း ကျွဲကြီးကို ရင်ဆိုင်လိုက်သည် ။
“ ကိုကျွဲ..အချင်းချင်းတွေဗျာ..ခင်ဗျားက ဖိုက်ချင်လို့လား….” ကျွဲကြီးလည်း သူ့ရိုင်ဖယ်သေနတ်နဲ့ တော်တော် ဝေးကွာနေသည် ။ တခုခု ဖြစ်ရင် ဒေါသရှေ့ထားတတ်ကြတဲ့ လူမိုက်တွေမို့ လက်နက်ကို အားကိုးကြသည် ။ လက်နက်နဲ့ ဝေးနေပြီး သေနတ် အဆင်သင့် ဖြစ်နေတဲ့ မောင်မောင်မျိုးလင်းက လက်ဦးမှု ရနေတာကို တွေ့တော့ ကျွဲကြီး လက်လျော့လိုက်ပြီး..“ မဖိုက်ချင်ပါဘူးကွာ… ဖိုက်ဖို့ မသင့်ပါဘူး ….ငါတို့ စည်းလုံးကြမှ ဖြစ်မယ်..ကဲ ငါဘဲ ရှာလိုက်ပါမယ်…” လို့ ပြောလိုက်ပြီး အောင်ကောင်း သော်ရဲ့ အိတ်ကပ်တွေကို လှန်လှော် နှိုက်ပြီး ရှာလိုက်သည် ။ “ ဟ.ဒီကောင်..ဒုရဲအုပ် ကွ….ခွေးသား..ဒီအိမ်ကို ဘယ်လို ရောက်လာသလဲ မသိဘူး….” မောင်မောင်မျိုးလင်းက ခေါင်းကို လက်နဲ့ အုပ်ကိုင်ပြီး ညည်းနေတဲ့ အောင်ကောင်းသော်ကို သေနတ်နဲ့ ချိန်ပြီး စစ်မေးတော့သည် ။ ကျွဲကြီးက “ ဟိတ်ကောင်..မင်း ဟိုစော်ကြီးကို ဘယ်မှာ ထားခဲ့လဲ..” လို့ အလန့်တကြား မေးလိုက်သည် ။ မောင်မောင်မျိုးလင်းက “ ကျုပ် ဟိုဖက်ခန်းမှာ ကြိုးနဲ့ တုပ်ထားခဲ့တယ်..ကျုပ် ပြူတင်းပေါက်က ဒီပုလိပ် အိမ်ထဲ ချောင်းကြည့်နေတာကို လှမ်းတွေ့လိုက်လို့ အပြင်ထွက်ပြီး ဆော်လိုက်တာ…” လို့ ပြောလိုက်ရင်း အောင်ကောင်းသော်ကို ခြေထောက်နဲ့ ကန်၇င်း စစ်မေးနေသည် ။ ဒါကို ကျွဲကြီးက ခါးထောက်ပြီး ကြည့်နေသည် ။ ကျွဲကြီးသည် ကိုယ်တုံးလုံးကြီး…နဲ့ ။ ဂွေးတန်းလန်း လီးတန်းလန်းနဲ့ ။ ၀ါဇင်သည် မြင်းတကောင်ရဲ့ လီးတန်လို ရှည်လျားလှတဲ့ ကျွဲကြီးရဲ့ လတန်ချောင်းကြီးကို ခိုး ကြည့်နေသည် ။ ကြက်သီးတွေ ဖျန်းကနဲ ဖျန်းကနဲ ထနေရသည် ။ ဒါကြီးနဲ့ ပိပိထဲ အထိုးခံရရင် ဘယ်လိုများ ဖြစ်မလဲ လို့ တွေးလိုက်မိနေသည် ။ ထမင်းစား စားပွဲမှာ ကုန်းပေးထားရတဲ့ နော်ပိုးရဲ့ စောက်ဖုတ်ကို ဒူးထောက်ထိုင်ပြီး ယက်နေတဲ့ ကျော်ထဲသည် လည်း ကိုယ်တုံးလုံးကြီး ဖြစ်လို့ သူ့တန်ဆာချောင်း တုတ်တုတ်ညိုညိုကြီးကို ပြာဇင်နဲ့ ၀ါဇင်တို့ တွေ့နေရသည် ။
ကျော်ထဲသည် စောက်ဖုတ်ကို ယက်နေရင်း ကွင်းတိုက်နေသည် ။ သူ့ဂွေးစိနှစ်လုံးသည် လှုပ်ခါရမ်းလျက်နေသည်။ နော်ပိုး စောက်ဖုတ်ကို ယက်နေတာတွေကို တွေ့ရလို့ ပြာဇင်တို့ ညီအမသည် စိတ်တွေ လှုပ်ရှားနေရတာတော့ အမှန်ဘဲ ။ ပြာဇင်နဲ့ ၀ါဇင်လည်း ကျွဲကြီးက သူတို့ကို အတင်း ကြမ်းနေရာက ဖမ်းမိလာတဲ့ အောင်ကောင်းသော် ဖက်ကို လှည့်သွား နေတဲ့အချိန် အလစ်မှာ ထပြေးဖို့ ကြံစည်လိုက်ကြသည် ။ သို့ပေမယ့် ကျွဲကြီးက လျင်သည် ။ မြင်သည် ။ သူတို့အကြံကို ရိပ်မိသွားသည် ။ သူတို့ကို ဖမ်းဆွဲလိုက်သည် ။ “ ဟိတ်…..ဒီလို မလုပ်နဲ့လေ…..ပြန်ထိုင်…..” ပြာဇင်နဲ့ ၀ါဇင်တို့ ဆောင့်ကြောင့်လေးတွေ ပြန်ဖြစ်သွားသည်။ “ ဒီလို ထပြေးလို့ ဘယ်ရမလဲ စောက်ကောင်မတွေ …ဟ..နင်တို့ စောက်ပါးစပ်တွေကို ဟစမ်း….”လို့ အော် ငေါက်လိုက်ပေမယ့် ကောင်မလေး နှစ်ယောက်က မျက်လွှာလေးတွေ ချပြီး သူတို့ ပါးစပ်တွေကို မဟကြ ။ စောစောက လီးမဲမဲတုတ်တုတ် နံနံကြီးနဲ့ ပါးစပ်ပေါက်ထဲ တအား ထိုးထည့်ခဲ့တော့ သူတို့ ဘယ်ဟချင်ပါ့မလဲ။ ကျွဲကြီးက ဖတ်ကနဲ ဖတ်ကနဲ သူတို့ကလေးတွေရဲ့ ပါးဖြူဖြူလေးတွေကို ခပ်ဆတ်ဆတ် ရိုက်လိုက်သည် ။ “ ဟ…ဟ……နင်တို့ စောက်ပေါက်လေးတွေကို ဟကြ…..စိတ်ထွက်လာလို့ တအား ပိတ်ရိုက်လိုက်ရင် နင်တို့ နာသွားမယ်…ဖူးယောင်ပေါက်ပြဲပြီး အကျည်းတန်သွားမယ်…အေးအေးဆေးဆေး ဟ..နင်တို့က ငါ့လက်ခုပ်ထဲက ရေ ဖြစ်နေပြီ ..ဘယ်လိုမဆို ငါ့လီးကို စုတ်ပေးကြရတော့မယ်..ငါလိုးတာကို ခံကြရတော့မယ်…အသာတကြည် စုတ် လိုက် အလိုးခံလိုက်ရင် နင်တို့အတွက် ပိုကောင်းမယ် ..ငါ ဂတိပေးတာက ငါ နင်တို့ကို လိုးပြီးရင် မသတ်ဘူး ဆိုတာဘဲ ….” ပြာဇင်နဲ့ ၀ါဇင်လည်း သူ့လက်ဝါးကြီးနဲ့ အရိုက်ခံလိုက်ရရင် မလွယ်မှန်းသိသည် ။ ကြောက်ကြောက်နဲ့ ပါးစပ်လေး တွေကို ဟပေးလိုက်ရသည် ။ ကျွဲကြီးက ပြာဇင်ရဲ့ ပါးစပ်ပေါက်ထဲကို သူ့လီးကြီး ကို ထိုးထည့်လိုက်သည် ။လီးကြီးက တုတ်လွန်းလို့ ပြာဇင်ရဲ့ ပါးစပ်ပေါက်နဲ့ မဆန့်မပြဲ ဖြစ်နေသည် ။
“ အု …” “ စုတ်..စုတ်….စုတ်လေ . . စုတ် . . ” ကျွဲကြီးက ဒစ်လုံးမြုပ်ရုံ ၀င်နေတဲ့ သူ့လီးကို ဆက်ထိုးသွင်းလိုက်သည် ။ ကျွဲကြီးက စုတ်ဖို့ တအားအော်လိုက် တာနဲ့ ပြာဇင်လည်း လီးကြီးကို ကဗျာကရာ စုတ်လိုက်သည် ။ “ နင့်လက်တဖက်နဲ့ လီးအရင်းကို ကိုင်ထား..နောက် လက်တဖက်နဲ့ ငါ့လဥတွေကို ကိုင်ထားပြီး ပွတ်ပေး…. ဖွဖွ ပွတ်ပေး….ဟဲ့..ဟို စောက်ကောင်မ..ကြည့်ထား..နင့်အမ စုတ်နေတာကို ကြည့်ထား…ပြီးရင် နင်လည်း စုတ် ရမယ် …အဲ..နင့်အင်္ကျီကို ချွတ်လိုက်စမ်း ….” ၀ါဇင်လည်း ပြာဇင်က ကျွဲကြီးရဲ့ လီးအရင်းကို လက်နဲ့ ဆုပ်ကိုင်ပြီး ခေါင်းတငြှိမ့်ငြှိမ့်နဲ့စုတ်ပေးနေတဲ့ အချိန် ကျွဲကြီး ခိုင်းတဲ့အတိုင်း သူမ ၀တ်ထားတဲ့ အင်္ကျီလေးကို ချွတ်ပစ်လိုက်ရသည် ။ လုံးဝန်းဖွေးနုနေတဲ့ ၀ါဇင်ရဲ့ အပျိုနို့လုံးလေးတွေ ဘွားကနဲ ပေါ်လာသည် ။ နို့နှစ်လုံးက လှလွန်းလို့ ကျွဲကြီးကော အနားမှာ အောင်ကောင်းသော်ကို နှိပ်စက် မေးမြန်းနေတဲ့ မောင်မောင်မျိုး လင်းကော မျက်လုံးအပြူးသား ပါးစပ် အဟောင်းသားနဲ့ ငေးမောသွားကြသည် ။ နို့သီးခေါင်း နီရဲရဲလေးတွေက အပြင်ကို စူထွက်နေကြသည် ။ ကျွဲကြီးသည် ပြာဇင်ရဲ့ စုတ်တာကို ခံနေရင်း ၀ါဇင်ရဲ့ နို့နှစ်လုံးကို လက်နဲ့ လှမ်းကိုင်လိုက်သည် ။ အိုး..အိစက်နူးညံ့လိုက်တာ….ဟင်း…. ပြာဇင်သည် အရင်က လီးစုတ်ဖူးသူ မဟုတ်ကြောင်း ကျွဲကြီး သိသည် ။ “ နင့်သွားတွေနဲ့ မခြစ်မိစေနဲ့…နင့်လျာလေးနဲ့ ကစားပေး…လျာကို အငြိမ်မနေနဲ့ လထစ်ကို လှည့်ထိုးပေး….” ပြာဇင့် အင်္ကျီလေးကိုတော့ ကျွဲကြီးက ချွတ်ပစ်လိုက်သည် ။ သည် ကောင်မလေးသည် သူ့ညီမလေးလိုဘဲ နို့ တွေက အပျံစား အမိုက်စား ဆိုတာ ကျွဲကြီးရော မောင်မောင်မျိုးလင်းကော တွေ့လိုက်ရသည် ။ မောင်မောင်မျိုလင်းသည် ကျွဲကြီးက နှစ်ယောက် တယောက် ဖြစ်နေလို့ သူ့ကို ကောင်မလေး တယောက်ကို ပေး ဖို့ ပြောလိုက်သည် ။
ကျွဲကြီးက “ ဟေ့ကောင်..မင်းမှာ ဟိုဟာမကြီး ရှိသားနဲ့ လာတောင်းမနေနဲ့..မင်းဟာမကြီး မင်းသွား လိုးစမ်း….” လို့ ခပ်ထန်ထန်နဲ့ ပြောလိုက်သည် ။ မောင်မောင်မျိုးလင်းလည်း ကျွဲကြီးနဲ့ ဖက် မဖြစ်ချင်တာနဲ့ အောင်ကောင်းသော်ကို လက်ပြန်ကြိုး တုပ်ခဲ့ပြီး ဒေါ် မွှေးမွှေးကို ထားခဲ့တဲ့ အခန်းထဲကို ပြန်သွားလိုက်သည် ။ ပြာဇင်နဲ့ ၀ါဇင်တို့ ညီအမနှစ်ယောက်ရဲ့ အပေါ်ပိုင်းဗလာကိုယ်တွေကို မြင်ရတာရယ်..ပြာဇင် ကျွဲကြီးကို လီးစုတ်ပေးနေတာတွေကို တွေ့ရလို့ တအားကိုထန်သွားပြီ ။ စောစောထဲက ကျော်ထဲ ဆိုတဲ့ ကရင်လေးက အိမ်ဖေါ်ကောင်မလေးကို ထမင်းစား စားပွဲပေါ် ကုန်းခိုင်းပြီး စောက်ပတ်ကို လျာနဲ့ ယက်နေတာကို တွေ့ထားကထဲက ထန်နေတာ ။ ဒေါ်မွှေးမွှေးကို စောက်ဖုတ်ထဲ လက်ညှိုးထိုးသွင်း မွှေပြီး နို့စို့နေတုံး အပြင်က အသံကြားတာနဲ့ ထွက်သွားပြီး ရဲအုပ် ဆိုတဲ့ အကောင်ကို သွားဆော်ထည့်ပြီး ဖမ်းနေရတာနဲ့ ဒေါ်မွှေးမွှေးကို ကြိုးတုပ်ပြီး ထားခဲ့ရတာ ။ အခန်းထဲကို ပြန်ဝင်လိုက်တော့ ကိုယ်တုံးလုံးကြီးနဲ့ ကြိုးတုပ်ထားခံနေရတဲ့ ဒေါ်မွှေးမွှေးကို တွေ့လိုက်ရသည် ။ “ ဟီး…..အပြင်မှာ ရဲတယောက် ရောက်နေတာနဲ့ ဆော်ထည့်ပြီး စစ်နေရတာနဲ့ ကြာသွားတယ်ဗျာ…ကဲ မမ… အလုပ်ပြန်စလိုက်ကြရအောင်…ဒီလို လုပ်ပါလား….ကျနော့်ကို အရင်ဆုံး မမ က လီးစုတ်ပေး……..” လို့ ပြောလိုက် ရင်း သူ့ပုဆိုးကို ချွတ်ပစ်လိုက်သည် ။
လီးတုတ်တုတ်ကြီး မတ်မတ်တောင်နေတာကို ဒေါ်မွှေးမွှေး တွေ့လိုက်ရသည် ။ လက်ပြန်ကြိုး တုပ်ခံထားရတဲ့ ဒေါ်မွှေးမွှေးကို ဒူးထောက် ထိုင်ခိုင်းပြီး မောင်မောင်မျိုးလင်းက သူ့လီးကြီးကို ဒေါ် မွှေးမွှေး ပါးစပ်ပေါက်နားကို တိုးကပ်ပေးလိုက်သည် ။ စောစောက ကျွဲကြီးက ကောင်မလေး နှစ်ယောက်ကို ပြောသလိုမျိုး အတုခိုးပြီး သူက ဒေါ်မွှေးမွှေးကို “ မမ က ကျနော့် လက်ခုပ်ထဲက ရေ ဖြစ်နေပြီ …ဒီတော့ မမ ကျနော် ခိုင်းတာကို လုပ်လိုက်..အသား အနာမခံချင်နဲ့… မမ ငြင်းဆန်လည်း ကျနော်က လိုးမှာဘဲ..မမ နာတာဘဲ အဖတ်တင်မယ်….” လို့ ပြောလိုက်သည် ။ သို့ပေမယ့် ဒေါ်မွှေးမွှေးသည် သူခိုင်းသလို သူ့လီးကို စုတ်ပေးဖို့ ပါးစပ်ကို ဟမပေး ။ “ ခက်တာဘဲ မမရယ်….မမက သိပ် အထာကိုင်တာဘဲ….” မောင်မောင်မျိုးလင်းလည်း ဒူးထောက်ထိုင်နေတဲ့ ဒေါ်မွှေးမွှေးပေါင်တန်ကြားကို လက်နဲ့ ဖမ်းစမ်းလိုက်သည် ။ မို့ဖေါင်းတဲ့ စောက်ဖုတ်အုံကြီးကို ကိုင်ဆုပ်လိုက်သည် ။ စောစောက သူ့လက်ညှိုးနဲ့ ဒီ စောက်ဖုတ်ကြီးထဲ ထိုးမွှေတဲ့အချိန် ဒေါ်မွှေးမွှေးရဲ့ စောက်ရည်တွေ တအား ထွက် လာလို့ တစွပ်စွပ် အသံတွေတောင် ထွက်လာခဲ့ရသည် ။ အခုလည်း သူမကို ဆွပေးမည် ဆိုတဲ့ အကြံ ရည်ရွယ် ချက်နဲ့ စောက်ဖုတ်ကို ကိုင်လိုက်တာ ။ “ အို…” စောက်ဖုတ်ထဲကို လက်ညှိုး ထိုးသွင်းလိုက်လို့ ဒေါ်မွှေးမွှေး ပါးစပ်က အသံလေး ထွက်လာသည် ။ မောင်မောင်မျိုးလင်းသည် သူ့လက်ညှိုးကို သွင်းလိုက် ထုတ်လိုက် လုပ်ပေးသည် ။
“ အို..အင်း…အင်း…..အင်း……..” “ မမ…..မမယောက်ျား….မရှိတဲ့ အချိန် မမ စောက်ပတ် ယားလားဟင်……” ဒေါ်မွှေးမွှေးသည် စောက်ဖုတ်ထဲ လက်ညှိုး အသွင်းအထုတ် အလုပ်ခံနေရချိန် သည်လို မေးခွန်းမျိုးကို လာမေး နေလို့ မဖြေဘဲ မျက်နှာလွှဲကာ နေနေသည် ။ “ မမ..မေးရင် ဖြေလေ ..မမ…….စကားနားထောင်နော်…မမကို မနှိပ်စက်ချင်ဘူး……” မောင်မောင်မျိုးလင်းက ကျွဲကြီးကို အတုယူပြီး စော်ကြီးရဲ့ ပါးပြင်ကို မနာအောင် ခပ်ဆတ်ဆတ်လေး ဖတ်ကနဲ ဖတါကနဲ ၇ိုက်လိုက်သည် ။ “ သတိပေးတာနော်…..ခိုင်းတာလုပ်….နာမယ်….” မာကျောတဲ့ လေသံနဲ့ ခြိမ်းခြောက်လိုက်ရင်း သူမ နို့သီးလေးတဖက်ကို လက်နဲ့ ဖိချေလိုက်သည် ။ “ အိုး……..အား……နာတယ်….” “ ခိုင်းတာကို လုပ်..လီးကို စုတ်ပေး…ခင်ဗျား လင်ကို လီး စုတ်ပေးနေကျဘဲ မဟုတ်လား…..မမရယ်…စုတ်..စုတ်…” ဒေါ်မွှေးမွှေး အခက်တွေ့နေသည် ။ သူခိုင်းတာကို မလုပ်ရင်လည်း ရိုက်နှက် နှိပ်စက်မှာက မလွဲမသွေဘဲ ။ စောက်ဖုတ်ထဲကို သူ့လက်ညှိုးနဲ့ သွင်းထုတ်နေတာကလည်း ကာမသွေးတွေကို ကြွလာစေသည် ။ ဒစ်ကားကား နီညိုညိုကြီးကို စုတ်ဖို့ ၀န်လေးနေသည် ။ ဖျတ်ကနဲ ပါးတဖက်ကို ခပ်ဆတ်ဆတ်လေး ရိုက်တာ ခံလိုက်ရလို့ ဒေါ်မွှေးမွှေးလည်း နှုတ်ခမ်းတွေကို ဟလိုက်ရသည် ။ သူ့ဒစ်လုံးကြီး ချက်ချင်းဘဲ ပါးစပ်ထဲကို ၀င်လာသည် ။ သူ့လက်ချောင်းတွေကလည်း တချိန် ထဲမှာ အစိကို ချေပွတ်လာသည် ။
“ အင်းဟင်းဟင်း…..အု…….” ပါးစပ်အပြည့် လီးတုတ်တုတ်ကြီးကို ငုံစုတ်ပေးလိုက်ရပြီ ။ သူ့လက်တဖက်က စောက်စိကို ကလိနေသလို ကျန်တဲ့ လက်တဖက်ကလည်း နို့တလုံးကို ဆုပ်နယ်ပေးနေပြီး တချက်တချက် နို့သီးမာမာလေးကို ချေပေးနေသည် ။ “ လီးကို ကိုင်ပြီး စုတ်…လက်တဖက်က ဂွေးစိတွေကို ပွတ်နယ်ပေး…..” အလိုလို သူ့အမိန့်တွေကို နာခံ လိုက်နာမိနေရပြီ ။ “ အိုး….အား..ဟုတ်ပြီ……မမ……မမ…လိမ္မာတယ်…..အိုး..စုတ်…စုတ်……..ပြီးရင် ကောင်းကောင်း လိုးပေးမယ်….” သူ့လီးတုတ်တုတ်ကြီးကို စုတ်ပေးနေရင်း ဂွေးစိတွေကို နယ်ပေးနေရသည် ။ သူက စုတ်နေတာနဲ့ အားမရဘဲ ပါးစပ်ထဲကို ကော့ ထိုးနေသည် ။ သူ့လက်တဖက်က ဒေါ်မွှေးမွှေးရဲ့ ပေါင်ကြားကို ရောက်သွားသည် ။ ဖူးကြွဖေါင်းနေတဲ့ အင်္ဂါစပ်ကြီးဆီကို ။ နှုတ်ခမ်းသားထူထူနဲ့ အကွဲကြောင်းကို ကိုင်လိုက်တော့ အရည်တွေ နစ်နေအောင် ရွှဲနေတာကို စမ်းမိသွားသည် ။ မောင်မောင်မျိုးလင်း ပြုံးဖြီးဖြီးနဲ့ တခွီးခွီး ရယ်လိုက်သည် ။ ဒေါ်မွှေးမွှေးသည် သူ့ကို ပုလွေကိုင်ပေးရင်း စိတ်တွေ လာပြီး သဘာဝ အရည်တွေ စိမ့်ထွက် စိုစိုရွှဲနေတာကို တွေ့လိုက်ရလို့ ။ မောင်မောင်မျိုးလင်း ရယ်လိုက်လို့ ဒေါ်မွှေးမွှေးသည် သူ့လတန်ကြီးကို စုတ်ပေးနေရင်းက ဖျတ်ကနဲ မော့ကြည့်လိုက်သည် ။ မောင်မောင်မျိုးလင်းက “ မမ လည်း စိတ်တွေ လာနေတာ တွေ့လိုက်ရလို့ သဘောကျသွားတာပါ…” လို့ ပြောရင်း သူ့လိင်တန်ကို ဒေါ်မွှေးမွှေးရဲ့ ပါးစပ်ထဲကို ကော့ကော့ထိုးလိုက်သည် ။
“… တော်တော့ မမ…ဒီလောက် စုတ်ပေးရင် လုံလောက်ပြီ……” မောင်မောင်မျိုးလင်းက အစုတ် ရပ်ခိုင်းလိုက်သည် ။ ဒေါ်မွှေးမွှေးလည်း ပါးစပ်ထဲက တုတ်ဖြိုးရှည်လျားတဲ့ မောင်မောင်မျိုးလင်းရဲ့ လိင်တန်ကို ချွတ်ဖြုတ်လိုက်ရသည် ။ မောင်မောင်မျိုးလင်းရဲ့ လက်ညှိုးနဲ့ လက်ခလယ် လက်ချောင်းတွေကတော့ ဒေါ်မွှေးမွှေးရဲ့ အင်္ဂါစပ်ကြီးထဲ တစွပ်စွပ်နဲ့ ထိုးဆောင့်နေဆဲဘဲ ။ “ မမ ကျနော် ဆွပေးနေတာ..ကောင်းလား..မှန်မှန်ဖြေ…..” ဒေါ်မွှေးမွှေးက ခေါင်းညှိမ့်ပြလိုက်သည် ။ မောင်မောင်မျိုးလင်းက ရယ်လိုက်ပြီး….“ ဒီလိုမှပေါ့..မမ….စာတတ်ပြီ……..မေးတာကို ပါးစပ်ကနေ ဖြေလိုက်….စကား ပြောတတ်တယ် မဟုတ်လား….ဟားဟားဟား……” လို့ ထပ်ပြောလိုက်တော့ ဒေါ်မွှေးမွှေးလည်း “ ကောင်းတယ်..” လို့ ဖြေလိုက်သည် ။ တကယ် ကောင်းလို့လား..သူ ရိုက်နှက် နှိပ်စက်မှာ စိုးလို့ ဖြေတာလားတော့ ဒေါ်မွှေးမွှေးဘဲ သိလိမ့်မည် ။ ဘယ်လိုဘဲ ဖြစ်ဖြစ် မောင်မောင်မျိုးလင်းကတော့ သူနဲ့ ပြေလည်အောင် ဆက်ဆံတဲ့ မေးတာကို ဖြေ ခိုင်းတာကို လုပ်တဲ့ ဒေါ်မွှေးမွှေးကို ကျေနပ် သဘောကျသွားသည် ။ ဆွနေတဲ့ လက်ချောင်းတွေကို ဒေါ်မွှေးမွှေးရဲ့ အဖုတ်ကြီးထဲက ထုတ်နုတ်လိုက်ပြီး….“ မမ..ဖင်ကုန်းလိုကစမ်း…ဖင် တွေကို ထောင်လိုက်ပြီး အဖုတ်ကြီးကို နောက်စွင့်ပေးလိုက်စမ်း…..” လို့ အမိန့်ပေးလိုက်သည် ။ ဒေါ်မွှေးမွှေးလည်း မဆိုင်းမတွ ချက်ချင်းဘဲ သူခိုင်းတာကို လုပ်လိုက်သည် ။ ကိုယ်လုံးတီးကြီးနဲ့ ဖင်ကြီးတွေ ကုန်းထောင်ပေးနေတဲ့ ဒေါ်မွှေးမွှေးသည် မီးရောင်အောက်မှာ တအား ကြည့်လို့ ကောင်းနေသည် ။ နို့လုံးကြီးတွေက ကုန်းလိုက်တဲ့အချိန် တုန်ခါ လှုပ်ရမ်းသွားကြသည် ။ အရည်တွေ တအား စိုရွှဲနေတဲ့ အဖုတ်ကြီးကို မောင်မောင်မျိုးလင်းက သဘောကျနေသည် ။
ရဲတွေ လက်က သူတို့ လွတ်ချင်မှ လွတ်မည်ကို မောင်မောင်မျိုးလင်း သိသည် ။ လွတ်အောင် ထွက်ပြေးမှာဘဲ ။ ဒါပေမယ့် ပြောလို့ မရဘူးလေ ။ ဘာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် အခုလို အခွင့်အရေး ရတုံး အပီကို အရသာ ခံသွားလိုက်အုံးမယ် လို့ စဉ်းစားရင်း ဒေါ်မွှေးမွှေးရဲ့ ဖင်တုံးကြီးတွေ ကြားက ပြူးထွက်နေတဲ့ အဖုတ်မြောင်းကြီးကို လျာပြားကြီးနဲ့ အောက်ဖက်ကနေ အထက် ပင့်ယက်တင်လိုက်သည် ။ “ အို့….ဟင့်….” မမျှော်လင့်ဘဲ စောက်ပတ် အယက်ခံလိုက်ရလို့ ဒေါ်မွှေးမွှေး တွန့်သွားသည် ။ တုန်သွားသည် ။ လျာကြီးက နီညိုညို အကွဲကြောင်းကြီး ကို စုန်ချီ ဆန်ချီ ယက်ပေးနေပြီ ။ “ အို…အို…အူး…….အား………ဟင်း…….ဟင်း…..” ဒေါ်မွှေးမွှေး ပါးစပ်က ညည်းငြူသံတွေ ထွက်လာသည် ။ သည်လို စောက်ဖုတ် အယက်မခံရတာ ကြာပြီ ။ ယောက်ျား ရခါစတုံးကတော့ လင်ဖြစ်သူက ဒေါ်မွှေးမွှေးကို အမြဲလို စောက်ဖုတ်ယက်ပေးခဲ့သည် ။ ကလေးတွေရ အသက်ကြီး မလာကြတော့ လင်ဖြစ်သူက လုပ်ချင်သေးပေ မယ့် ဒေါ်မွှေးမွှေးက လက်မခံတော့ ။ သမီးတွေကလည်း အပျိုမလေးတွေ ဖြစ်လာကြပြီ ။ တခန်းစီ နေကြပေ မယ့် ဒေါ်မွှေးမွှေး လိပ်ပြာ မသန့်ဘူး ။ အခုလို မရတာ ကြာခဲ့တဲ့ဟာ ရလိုက်တော့ တအား ခံလို့ ကောင်းနေသည် ။ မောင်မောင်မျိုးလင်းကလည်း ဘာဂျာသမား ။ ဒေါ်မွှေးမွှေး မသိတာက မောင်မောင်မျိုးလင်းသည် ဘာဂျာကျွမ်းရုံ မကဘူး ။ ဖင်ချပါ ကျွမ်းတဲ့ ဖင်လိုးသမား တယောက် ဆိုတာကိုပါဘဲ ။ မောင်မောင်မျိုးလင်းသည် စောက်ဖုတ်ကို ယက်နေရင်း ကပ်ရက် ရှိနေတဲ့ စအိုပေါက်ညိုညိုလေးကို ကြည့်ပြီး ဖီ လင်တွေ တက်လာသည် ။ သည် ခရေပွင့်လေး ထဲကို သူ့ဒစ်ကားကြီး သွင်းထည့်ချင်စိတ်တွေ တဖွားဖွား ပေါ် လာသည် ။ စောက်ဖုတ်ကို ယက်နေရာက လျာထိပ်နဲ့ ခရေပွင့်လေးကို တို့ထိလိုက်သည် ။
“ အာ့…” စအိုပေါက်ကို စပြီ လျာထိပ်နဲ့ ထိုးလိုက်လို့ ဒေါ်မွှေးမွှေး ဖင်တုံးကြီးတွေ တုန်သွားသည် ။ အို…သူ..သူ…….မရွံမရှာ.ဖင်ပေါက်ကို လာကလိနေတယ်ကွာ….. သူမ စိတ်ထဲက ပြောလိုက်ခြင်းသာ ..။ မောင်မောင်မျိုးလင်းကို ပြောလည်း မပြောရဲ ။ တားလည်း မတားရဲ ။ သည် အချိန်မှာ ကြိုးတုပ်ရက်နဲ့ ကြမ်းပြင်မှာ ရှိနေတဲ့ အောင်ကောင်းသော်သည် မောင်မောင်မျိုးလင်း ရိုက်နှက် ကန်ကျောက်ထားခဲ့လို့ နာကျင်နေတဲ့ကြားက ကောင်မလေး နှစ်ယောက်ကို လီးစုတ်ခိုင်းနေတဲ့ ကျွဲကြီးဖက်ကို ကြည့်နေသည် ။ အောင်ကောင်းသော်သည် ဂျိုစောင်းမှာရော လည်ဂုတ်မှာရော ဒါဏ်ရာတွေ ရနေပြီး ၀မ်းဘိုက် မှာရော ကျောမှာပါ အကန်ခံထားရတဲ့ ဒါဏ်ရာတွေကလည်း နာကျင်နေတဲ့ကြားက ကျော်ထဲနဲ့ နော်ပိုး..ကျွဲကြီးနဲ့ ကောင်မလေး နှစ် ယောက်တို့ရဲ့ ကျင့်ကြံနေတဲ့ မြင်ကွင်းတွေကြောင့် သူ့ငပဲတန်ကြီးမှာ မာကျော တောင်မတ်နေသည် ။ ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာလည်း ကျော်ထဲ ဆိုတဲ့ ကရင်လေးက နော်ပိုး ဆိုတဲ့ ကရင်မလေးကို စားပွဲစောင်းမှာ စလိုးနေပြီ ။ ကရင်မလေးရဲ့ အော်သံက ကျယ်လောင်လှသည် ။ ကျွဲကြီးရဲ့ လီးကို လုပြီး စုတ်ပေးနေရတဲ့ ညီအမနှစ်ယောက် လည်း ကရင်မလေးရဲ့ အော်သံကြောင့် အဲဒီဖက်ကို လှည့်ကြည့်လိုက်ကြသည် ။ ကရင်မလေးရဲ့ စောက်ဖုတ်ထဲကို ဒလစပ် ထိုးညှောင့်နေတဲ့ ကျော်ထဲရဲ့ လီးတန် တုတ်တုတ်ညိုညိုကြီးက ကြက်သီးထစရာကြီး ။ ကျွဲကြီးက ကောင်မလေးတွေကို တချိန်ထဲ နှစ်ယောက် အတူတူ စုတ်ခိုင်းထားသည် ။ ညီအမနှစ်ယောက် ပြိုင်တူ စုတ်နေရလို့ တယောက်က လိင်တန်ကို ပါးစပ်ထဲ ငုံစုတ်နေတဲ့အချိန် တယောက်က တွဲလောင်းကျနေတဲ့ ဂွေးဥ မဲမဲကြီး နှစ်လုံးကို စုတ်လိုက် လျာနဲ့ ယက်လိုက် လုပ်ပေးနေရသည် ။
ကျွဲကြီးက ကျော်ထဲ လိုးနေတာကို ကြည့်နေကြတဲ့ ကောင်မလေး နှစ်ယောက်ကို “ မကြာခင် နင်တို့ကိုလည်း အဲလို လိုးမှာ….ဟီး…နင်တို့ ကြိုက်မှာပါ……” လို့ ပြောရင်း စုတ်နေတဲ့ပြာဇင့် ပါးစပ်ထဲကို ဖိဖိညှောင့်နေသည်။ “ ဟိတ် ဟိုကောင်မလေး….နင့်နံမည် …ဘယ်သူ…..” “ ၀ါဇင်…..” “ အေး..၀ါဇင်…နင် ငါ့အနားတိုးစမ်း…..” ပြာဇင်နဲ့ ၀ါဇင်တို့သည် ကျွဲကြီး ချွတ်ပစ်လိုက်လို့ ကိုယ်ပေါ်မှာ ဘာ အ၀တ်မှ မရှိနေတော့ဘူး ။ ဖြူဖြူဖွေးဖွေး တောင့်တင်းစိုပြေတဲ့ ကောင်မလေးတွေရဲ့ မိမွေးတိုင်း အလှအပတွေကို ကျွဲကြီး တ၀ကြီး ခံစားနေသည် ။ ပေါင်တန်သွယ်လေး နှစ်ချောင်းရဲ့ ကြားက မို့ဖေါင်းနေတဲ့ စောက်ဖုတ်ဖေါင်းဖေါင်းကို သူ့လက်ဝါးကြီးနဲ့ သပ် လိုက်သည် ။ “ အင်….ဟင့်…” လက်ဝါးကြမ်းကြမ်းကြီးနဲ့ အသပ်ခံလိုက်ရလို့ ၀ါဇင်လည်း သိမ့်သိမ့်တုန်သွားရသည် ။ စောက်စိလေးကို ပွတ်မိ သွားလို့ပါ ။ ပြာဇင်ရဲ့ နို့နှစ်လုံးကို လက်တဖက်နဲ့ နယ်ချေ ကျန်တဲ့ လက်တဖက်နဲ့ ၀ါဇင်ရဲ့ အကွဲကြောင်းက နှုတ်ခမ်းသား ထူထူလေးတွေကို စမ်းနေတဲ့ ကျွဲကြီးသည် လောကစည်းစိမ်ကို အပြည့်အ၀ ခံစားနေပေသည် ။ သည် အချိန်မှာ ဒေါ်မွှေးမွှေးတို့ အိမ်က ခြံစောင့်ကြီး စောအားမေသည် လေမိုးကြားထဲ အကူအညီတောင်းဖို့ လမ်းမကြီး ဖက်ကို ကြိုးစားပြီး သွားနေသည် ။ ခပ်ဝေးဝေးမှာ မဲမဲ မဲမဲ နဲ့ လူတစု ကို စောအားမေ တွေ့လိုက်သည် ။ အကူအညီတောင်းဖို့ သည် လူတွေဆီကို စောအားမေ ဦးတည်လိုက်သည် ။ “ ဟေး….ဟေး…” လို့လည်း ပါးစပ်က အော်ခေါ်လိုက်သည် ။
သည် လူတွေကလည်း သူ့ကို မြင်သွားပုံရသည် ။ သူ့ဖက်ကို လျှောက်လာကြသည် ။ အနီးကို ရောက်လာတော့ သူတို့သည် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ မဟုတ်ဘဲ ပုဆိုးတိုတို ၀တ်ထားပြီး ဓါးလွတ်တွေ ကိုင် ထားကြတဲ့ လူတွေ ဖြစ်နေသည် ။ အပေါ်ပိုင်း ဗလာနဲ့ ဒီလူလေးယောက်သည် အသားအလွန်မဲပြီး ပိန်ကပ်ကပ် ဆိုတာကို စောအားမေ တွေ့လိုက်ရသလို သူတို့ရဲ့ လက်တွေထဲမှာလည်း ကိုင်းခုတ်ဓါးတွေကို ကိုင်ထားကြတာ ကိုလည်း တွေ့လိုက်ရလို့ အနောက်ကို ပြန်ဆုတ်မိသည် ။ “ ဟိတ်..အဖိုးကြီး..မပြေးနဲ့..လိုက်ခုတ်လိုက်လို့ ပွဲချင်းပြီးသွားမယ်….” လူလေးယောက်က စောအားမေကို ၀ိုင်းထားလိုက်ကြသည် ။ “ ခင်ဗျား..ဘယ်ကလဲ.ဘယ်ကို သွားမလို့လဲ…..” “ အဘ….အဘ…နွားလေး ပျောက်သွားလို့ လိုက်ရှာရင်း.မိုးထဲလေထဲ….လမ်းပျောက်သွားလို့ပါ……” “ ဟားဟားဟား…….တော်တော် နုံတဲ့ အဖိုးကြီး….နွားပျောက်လို့တဲ့..မပူနဲ့..နွားတွေ့ရင် အမဲပေါ်လိုက်မယ်…” သူတို့ထဲက တယောက်က စောအားမေရဲ့ ကျောကုန်းကို ဓါးပြားနဲ့ ဗျန်းကနဲ တအား ၇ိုက်ထည့်လိုက်သည် ။ “ အား…..မလုပ်ပါနဲ့ လူလေးတို့ရယ်..အဘ အသက်ကြီးပါပြီ….” “ အသက်ကြီးတော့ ဘာလုပ်ရမလဲ…အသက်ကြီးတဲ့ ခင်ဗျား လီးကြီးသလား ကြည့်ရအောင်…မှန်းစမ်း…” သူ့ပုဆိုးကို ရုတ်တရက် ဆောင့်ဆွဲချွတ်လိုက်တာ ခံရလို့ စောအားမေ လက်နဲ့ ကဗျာကရာ ဖမ်းဆွဲလိုက်ပေ မယ့် လေကလည်း ပြင်းနေလို့ ပုဆိုး ကျွတ်သွားသည် ။ လူလေးယောက်က တဟားဟား အော်ရယ်လိုက်ကြသည် ။
“ လီးကလေးက လက်တောက်လောက်လေး….၀ါးဟားဟားဟားဟား…….ဘူးဝါးဟားဟားဟား…….” “ အဘကို ချမ်းသာပေးပါ လူလေးတို့ရယ်….” “ သွားစမ်းဗျာ….မသာကြီး….သတ်မိလိမ့်မယ်….အလကား ဆန်ကုန်မြေလေးကြီး…” “ ကဲပါကွာ…..တိုးမောင်း..ဟောဟိုက မီးလင်းနေတဲ့ဆီ သွားကြည့်ကြရအောင်..တခုခု ရလိုရငြား…..” စောအားမေသည် သူ့ကို ဆောင့်တွန်းလိုက်တာ ခံရလို့ ကတ္တရာ လမ်းမကြီးပေါ်မှာ မှောက်ရက်လေး လဲကျသွား ရသည် ။ လူလေးယောက်သည် မီးရောင်လဲ့လဲ့ မြင်နေရတဲ့ ဒေါ်မွှေးမွှေးတို့ ခြံကြီးဖက်ကို ဦးတည်ပြီး သွားနေ ကြသည် ။ “ ဘုရား..ဘုရား….သူတို့ အိမ်ဖက်ကို သွားနေကြပြီ..ငါလည်း ဘာမှ မတတ်နိုင်..တနေရာရာကနေ အကူအညီ တောင်းဖို့ဘဲ အရေးကြီးတယ်……” ဒူးပြဲလက်တွေ ပွန်းပဲ့သွားပေမယ့် စောအားမေသည် ကြိုးစား လူးလဲ ထလိုက်သည် ။ ကျွဲကြီးသည် ၀ါဇင်လေးရဲ့ အဖုတ်ဖေါင်းဖေါင်းလေးကို အုပ်ကိုင်လိုက်တာနဲ့ အရည်တွေ စိုစိုရွှဲနေတာကို စမ်းမိ လိုက်သည် ။ ကောင်မလေးသည် သူ့ကို ကြောက်လို့ သူခိုင်းတာတွေကို လုပ်နေရတာ ဖြစ်ပေမယ့် အထိအတွေ့ အမြင်ကြောင့် သဘာဝစိတ်တွေ လာပြီး အရည်တွေ ရွှဲနေပြီ ။
“ အဟီး…..နင်လည်း စောက်ပတ်ကြွလာပြီ မဟုတ်လား..ကောင်မလေး…ဒါ..သဘာဝဘဲလေ…..ယောက်ျားလီးနဲ့ထိ တွေ့ရင် စိတ်ထကြမှာဘဲ…ကျော်ထဲ လိုးနေတာကိုလည်း နင်တို့ ကြည့်နေတာကိုး….စောက်ရည်တွေ ရွှဲနေတော့ ကောင်းတာပေါ့….တံတွေးကူစရာ မလိုတော့ဘူး…..ဟားဟားဟား……” ကျွဲကြီးရဲ့ လက်ညှိုးတုတ်တုတ်ကြီးက ၀ါဇင်ရဲ့ အဖုတ်အကွဲကြောင်းကို စုန်ချီ ဆန်ချီ ပွတ်ပေးနေတော့ ၀ါဇင်လည်း ဖင်တကြွကြွနဲ့ တဟင်းဟင်း ဖြစ်လာရသည် ။ နှုတ်ခမ်းသားထူထူတွန့်တွန့်လေးတွေနဲ့ စောက်စိလေးကို ကျွဲကြီး က ဖိချေပေးနေပြန်တော့ ၀ါဇင်မှာ ကျော်ထဲနဲ့ နော်ပိုး လိုးနေတာကို မြင်ကထဲက စိတ်က ကြွနေတာ ဆိုတော့ တအား ခံလိုက်ချင်စိတ်တွေ ဖြစ်မိရပြီ ။ နဘေးမှာ အမဖြစ်သူ ပြာဇင်ကလည်း ကျွဲကြီးရဲ့ လီးတုတ်ကြီးကို တပြွတ် ပြွတ်နဲ့ အပီအပြင် စုတ်ပေးနေရသည် ။ “ ကဲ အကြီးမ..ခဏ ရပ်အုံး…အငယ်မကို ပေးစုတ်လိုက်…..” ကျွဲကြီးက ပြာဇင့်ကို အစုတ်ရပ်ခိုင်းလိုက်သည် ။ ပြာဇင်လည်း စုတ်ရတာ ပါးစပ်တွေ ပူထူ ညောင်းနေပြီ ။ လီး တန်တုတ်ကြီးကို ပါးစပ်ထဲက ချွတ်ထုတ်လိုက်သည် ။ ၀ါဇင်လည်း ကျွဲကြီးက သူမဆံပင်ကနေ ဆွဲယူခေါ်လိုက်လို့ ကျွဲကြီး အရှေ့ကို ရောက်သွားသည် ။ “ အငယ်မ..စုတ်တော့….အကြီးမ..ငါ့မျက်နှာပေါ်ကို တက်ခွလိုက်….” ၀ါဇင်လည်း ကျွဲကြီး ခိုင်းတာကို ချက်ချင်းဘဲ လုပ်သည် ။ မဲမဲတုတ်တုတ် လတန်ရှည်ကြီးကို အရင်းပိုင်းကနေ ဆုပ် ကိုင်လိုက်ပြီး စစုတ်လိုက်သည် ။
လီးက တုတ်လွန်းလို့ ၀ါဇင်ရဲ့ ပါးစပ်ထဲ ပြည့်နေသည် ။ “ စုတ်..စုတ်……အား..ကောင်းတယ်….စုတ်စမ်း..လျာကစားပေး..နင့်လျာကို လျှောက်လှုပ်ပေး..ကလိပေး…အင်း…. အေး..ဟုတ်ပြီ…သွက်သွက်လေး ကစား……အား…..ဟား..ကောင်းတယ်….စုတ်…စုတ်……..” ပြာဇင်က တတွတ်တွတ် ပြောနေတဲ့ ကျွဲကြီးရဲ့ မျက်နှာပေါ်ကို တက်ခွထိုင်လိုက်သည် ။ ပြာဇင်ရဲ့ အရည်တွေ စိုစိုရွှဲနေတဲ့ အဖုတ်သည် ကျွဲကြီးရဲ့ ပါးစပ် တည့်တည့်ကို ဖိသွား ထိသွားသည် ။ “ ရှလွတ်…..” ကျွဲကြီးက အဖုတ်ဖေါင်းဖေါင်းရဲ့ အကွဲကို လျာနဲ့ သိမ်းယက်ပစ်လိုက်သည် ။ ပြာဇင် “ အို့..” လို့ အသံလေး ထွက်ပြီး ဖင်လေး ကြွသွားသည် ။ ကျွဲကြီးက စောက်စိနေရာကို သူ့နှုတ်ခမ်းကြီးနဲ့ စုတ်လိုက်ပြန်သည် ။ “ ပြွတ်…” “ အူး….” သည် အချိန်မှာ ၀ါဇင်က ဂွေးစိကြီးတွေကို လက်တဖက်နဲ့ ဆွဲကိုင်ထားရင်း အတန်ကြီးကို တပြွတ်ပြွတ်နဲ့ စုတ်ပေးနေသည် ။ ကျော်ထဲကတော့ နော်ပိုးကို စားပွဲစောင်းမှာ ကုန်းခိုင်းပြီး ဆောင့်ထည့်နေရာက ဧည့်ခန်းထဲက ဆိုဖါကြီး ဆီ ကို ဆွဲခေါ်သွားလိုက်သည် ။ နော်ပိုးမှာလည်း ကျော်ထဲ စစလုပ်တုံးကတော့ ကြောက်လို့ ခံလိုက်တာ ဖြစ်ပေ မယ့် လုပ်တာတွေကို ခံရင်း ခံရင်း စိတ်ပါလာသည် ။ ဆိုဖါဆီကို ရောက်တာနဲ့ ပက်လက် အိပ်ပေးကာ ပေါင်တန် တွေကို ဘေးတဖက်တချက်ကို ဖြဲကားပေးလိုက်သည် ။ ကျော်ထဲလည်း အသာတကြည် သူလိုတာကို ပေးနေတဲ့ နော်ပိုးကို သဘောကျသွားသည် ။ ကျော်ထဲသည် သူ့ကို ဆန့်ကျင်သူ ဆိုရင် မိန်းမသားဘဲ ဖြစ်ဖြစ် သက်ညှာသူ မဟုတ် ။ ဘုရားကျောင်းထဲက တ ရားဟောဆရာမလေး နှစ်ယောက်ကို မုဒိန်းကျင့်ပြီးတဲ့နောက် သတ်ဖြတ်ပစ်ခဲ့တာမှာ သည် ဆရာမလေးတွေက သူ့ကို ပြန်လှန် သတ်ပုတ် ခုခံသလို နစ်နစ်နာနာ ဆဲရေးတိုင်းထွာတဲ့အတွက် သူသည် ဒေါသတွေ တားဆီးလို့ မရအောင် ပေါက်ကွဲသွားပြီး သတ်ပစ်ခဲ့တာ ။
အခုတော့ နော်ပိုးကို မုဒိန်းကျင့်ပြီးလည်း သူ သတ်ပစ်ဖို့ စိတ်မကူး ။ နော်ပိုး သူ့နောက်ကို လိုက်မယ် ဆိုရင် သူက သူနဲ့ တပါတည်းတောင် ခေါ်သွားချင်နေသည် ။ နော်ပိုးနဲ့ သူနဲ့ လူမျိုး တူတာ မက ဘာသာစကားချင်း တူတာကြောင့် သူ သဘောကျနေသည် ။ ကျော်ထဲလည်း ပက်လက် ပေါင်ဖြဲပေးထားတဲ့ နော်ပိုးရဲ့ အဖုတ်ထဲကို သူ့တုတ်ကြီး ထိုးနှစ်လိုက်သည် ။ “ အီး…..” တုတ်ဖြိုးလှတဲ့ တုတ်ကြီးက ပျိကနဲ ၀င်သွားသည် ။ နော်ပိုးရဲ့ နို့ကြီးနှစ်လုံးကို တဖက်ပြီး တဖက် ပြွတ်ကနဲ ပြွတ်ကနဲ စို့ရင်း ဖိဖိလုပ်ပြီ ။ စွိကနဲ စွိကနဲ အသံတွေ ထွက်လာသည် ။ သည် အချိန်မှာ မောင်မောင်မျိုးလင်းသည်လည်း ဒေါ်မွှေးမွှေးကို တဖန်းဖန်း တဖြောက်ဖြောက်နဲ့ အပီ ဆွဲနေသည်။ ဒေါ်မွှေးမွှေးသည် မတတ်သာလို့ ကြောက်လို့ ခံနေရတာ ဖြစ်ပေမယ့် သူ့လင်ထက် အသက်လည်းငယ် အား လည်းကောင်း လိင်တန်လည်း ပိုကြီးပိုရှည်တဲ့ မောင်မောင်မျိုးလင်းရဲ့ လိုးတာတွေကို ခံရတာ အရသာက တအား ကောင်းနေလို့ စိတ်ထဲမှာ ကြိုက်မိသွားသည် ။ မလုပ်တော့ဘဲ ရပ်ပစ်လိုက်မှာကိုတောင် စိုးပြီး သူ့ကို ပြန်ဖက် ရင်း ဖင်ကြီးတွေကို ကော့ပေးနေမိသည် ။ မောင်မောင်မျိုးလင်းသည် စိတ်ပါလက်ပါ ကော့ပေးနေတဲ့ ဒေါ်မွှေးမွှေး ကို တွေ့ပြီး အံ့အားသင့်နေသည် ။ သူမကို လုပ်ရတာလည်း ပို စိတ်ထန်လာသည် ။ ဒလကြမ်းနင်း ဆောင့်ထည့်တော့သည် ။
ဒေါ်မွှေးမွှေးလည်း မောင်မောင်မျိုးလင်း ဆောင့်ထည့်သမျှကို တုံ့ပြန်ကော့ပေးရင်း တဟင်းဟင်းနဲ့ အသံထွက် ရင်း ခံနေသည် ။ သူမအဖြစ်က မုဒိန်းသမားရဲ့ အဓမ္မ ကျင့်တာကို ခံနေရတာနဲ့ မတူဘဲ အလိုတူ အလိုပါ စိတ်တူသဘောတူအလိုးခံနေတာနဲ့ တူနေသည် လို့ မုဒိန်းမှုပေါင်းများစွာကို တရားစွဲသူအဖြစ် တွေ့ခဲ့တဲ့ ဥပဒေ၀န်ထမ်း တယောက်မို့ သိနေသည် ။ ဒါပေမယ့် မတတ်နိုင်ဘူး ။ စိတ်ရဲ့ အလိုကို လိုက်ပြီး သူဆောင့်ထည့်တာတွေကို အရသာခံ နေမိလိုက်သည် ။ မောင်မောင်မျိုးလင်းလည်း ဒေါ်မွှေးမွှေးရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတဲ့ နို့ကြီးနှစ်လုံးကို ပယ်ပယ်နယ်နယ် စို့လိုက်ကိုင်လိုက် ညှစ်လိုက် လုပ်ရတာ တအား ကျေနပ်သလို သမီးနှစ်ယောက် အမေ ဖြစ်တာတောင် စီးစီးပိုင်ပိုင်နဲ့ ကြပ်နေဆဲ သူမရဲ့ စောက်ဖုတ်ကိုလည်း ကြိုက်သည် ။ စိတ်တိုင်းကျ အားကုန် ဆောင့်ထည့်လိုက်ပြီး တအား တအား ကောင်းလာသည် ။ ကောင်းလာသည် ။ အရမ်း အရမ်း ကောင်းသွားသည် ။ အား…….အား……..အား……..။ တကိုယ်လုံး ကျင်တက် ကောင်းသွားတဲ့ အရသာနဲ့ အတူ သူ့လီးထဲက အရည်ပျစ်ပျစ်တွေကို အရှိန်အဟုန် ပြင်းပြင်းနဲ့ တဖျတ်ဖျတ် ထုတ်လွှတ်လိုက်လေသည် ။ ဒေါ်မွှေးမွှေးမှာ မောင်မောင်မျိုးလင်း မပြီးခင်ထဲက နှစ်ကြိမ်တောင် ပြီးခဲ့တာမို့ တအား ကျေနပ်နေပေမယ့် ဒင်း ရဲ့ သုတ်ရည်တွေ သူမအထဲကို ပန်းထုတ်လိုက်တာကိုတော့ အရမ်း လန့်သွားသည် ။ မောင်မောင်မျိုးလင်းကလည်း ပြီးသွားတာနဲ့ သူ့တန်ဆာကို ဒေါ်မွှေးမွှေးရဲ့ စောက်ဖုတ်ထဲက ဆွဲထုတ်လိုက်လို့ ဒေါ်မွှေးမွှေးက “ ငါ ရေဆေးလို့ ရမလား….” လို့ သူ့ကို မေးလိုက်သည် ။
“ အင်း…” လို့ မောင်မောင်မျိုးလင်း က ဖြေသည် ။ ဒေါ်မွှေးမွှေး ရေချိးခန်းဆီကို ချက်ချင်းဘဲ ပြေးသွားလိုက်ပြီး ကြမ်းပြင်မှာ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ပြီး သေးပေါက်လိုက်သည် ။ ပြီးတော့ စောက်ဖုတ်ကို ဆေးကြောသည် ။ မောင်မောင်မျိုးလင်း လည်း ဒေါ်မွှေးမွှေးရဲ့ မလှမ်းမကမ်းမှာ ရှိတဲ့ အိမ်သာခွက်ထဲ သေးကော့ပန်းနေရင်း လိုးခဲ့ ရတာကို စမြုံ့ပြန်နေသည် ။ တော်တော် လိုးလို့ကောင်းတဲ့ စော်ကြီး ။ နောက်တချီ ဆိုရင် ဖင်ကိုပါ ချမယ် ..။ ဧည့်ခန်း ဆိုဖါပေါ်မှာ တဖန်းဖန်း တဖြောင်းဖြောင်းနဲ့ အပီ လိုးဆောင့်နေတဲ့ ကျော်ထဲသည် သူ့အလိုကို လိုက် သူ့အလိုးကို တချက်မငြီးဘဲ ခံတဲ့ နော်ပိုးကို တအား သဘောကျသွားပြီး သည် အိမ်ကနေ ထွက်သွားရင် အပါ ခေါ်သွားဖို့ စဉ်းစားနေသည် ။ အင်း….စောက်ပတ်က ဘယ်အချိန် လိုးလိုးရတယ်…ကောင်မလေးကို ခေါ်သွား မယ်..အရေးကြီးတာက မိုးမလင်းခင် ဒီကနေ ခွာရမယ်….ရဲတွေက သည် အနီးအနားကို ပိုက်စိပ်တိုက် ရှာကြမှာ သေချာတယ်….လို့ သူ တွက်ဆနေသည် ။ တအား လိုးနေပေမယ့် သူ့လွတ်မြောက်လမ်း..သူ့အန္တရာယ်ကိုလည်း သူ စဉ်းစားသည် ။ ကျွဲကြီးရဲ့ မျက်နှာပေါ် ခွထိုင်ထားပေးရတဲ့ ပြာဇင်ရော ကျွဲကြီးရဲ့ လီးမဲမဲတုတ်တုတ်ကြီးကို စုတ်ပေးနေရတဲ့ ၀ါဇင် ရော မလှမ်းမကမ်းမှာ ဆိုဖါပေါ် အပီ လိုးနေတဲ့ ကျော်ထဲနဲ့ နော်ပိုးကို တွေ့နေရသည် ။ ဒါကြောင့်လည်း သည် ညီအမနှစ်ယောက်စလုံးသည် မုဒိန်ုးသမားကြီး ကျွဲကြီးရဲ့ အတင်း ခိုင်းစေတာတွေကို အလိုမတူဘဲ ကြောက်လို့ လုပ်ပေးနေရပေမယ့် သူတို့ရဲ့ မိန်းမအင်္ဂါသည် သဘာဝ အရည်တွေနဲ့ စိုလူးပေပွ လို့ နေသည် ။ ယောက်ျားနဲ့ မိန်းမ လိင်ဆက်ဆံတာကို အင်တာနက်ပေါ်မှာသာ မြင်ဘူးပြီး အခုလို ကိုယ့်အရှေ့ နီးနီးကပ်ကပ် မှာ မမြင်ဘူး မတွေ့ဘူးကြလို့ အပျိုရိုင်းမလေး နှစ်ယောက်မှာ အခုလို စောက်ရည်တွေ စိုစိုရွှဲနေရအောင် စိတ်တွေ ထဲလှုပ်ရှားနေရတာ ဖြစ်သည် ။ ကျွဲကြီးရဲ့ လီးကြီးကို ကိုင်နေရ စုတ်နေရတာကလည်း ရွံလည်းရွံ ကြောက်လည်း ကြောက် စိတ်လည်း လှုပ်ရှားဖေါက်ပြန်နေကြရသည် ။
သည် အချိန်မှာ အောင်ကောင်းသော်သည် လက်ပြန်ကြိုး အတုပ်ခံနေရပြီး ပေါက်ပြဲ ဒါဏ်ရာတွေ ရနေတာတောင် သည် ကာမမြင်ကွင်းတွေကို အနီးကပ် ရှုစားနေရတာကြောင့် သူ့ပေါင်ကြားက တန်ဆာကြီးသည် ကာကီဘောင်း ဘီထဲက ငေါငေါကြီး ထိုးထောင်နေသည် ။ ကျွဲကြီးသည် သူ့မျက်နှာပေါ်မှာ ၀ဲနေတဲ့ ပြာဇင်ရဲ့ စောက်ဖုတ်ကို လျာနဲ့ ပင့်ယက်နေရင်းက အောင်ကောင်းသော် ကို သတိရသွားပြီး လှမ်းကြည့်လိုက်သည် ။ အောင်ကောင်းသော်ရဲ့ ဒုတ်ကြီး ဘောင်းဘီ ထဲက ထောင်မတ်နေတာကို တွေ့လိုက်တော့..“ ခွေးမသား ပုလိပ်..စောက်ရေးထဲ လီးတောင်နေတယ်….မအေလိုး စောက်ရူး….” လို့ လှမ်းဆဲလိုက်လေသည် ။ မောင်မောင်မျိုးလင်းလည်း ဒေါ်မွှေးမွှေးကို အ၀တ်အစား ပြန်ဝတ်ခွင့် မပေးဘူး ။ “ ခင်ဗျား..ဒီအတိုင်းဘဲ နေဗျာ…ခင်ဗျား ကိုယ်လုံးက တော်တော် လှတယ်…..” လို့ ပြောရင်း တင်ပါးအိအိကြီးတွေ ကို ဖျန်းကနဲ ရိုက်ထည့်သည် ။ “ ချမ်း…..ချမ်းလို့ပါကွာ….အ၀တ် ပြန်ဝတ်ပါရစေ….” “ မရဘူး….ခင်ဗျား…နဲ့ မကြာခင်ဘဲ ထပ် လိုးကြအုံးမှာ…၀တ်မနေပါနဲ့ မထူးပါဘူး…..” စောအားမေးသည် မိုးစက်တွေ မျက်နှာကို ပက်ဖျန်းနေတဲ့ကြားက သူ့ရှေ့တည့်တည့် အဝေးကြီးမှာ မီးရောင် ကို တွေ့လိုက်လို့ တအား ၀မ်းသာသွားသည် ။
“ ဟာ…..ကား…ကားတစီး လာနေတယ် . . .” သည် အချိန်မှာ စောအားမေကို ဓါးပြားနဲ့ ရိုက်..ပုဆိုးဆွဲချွတ်..တွန်းလှဲသွားတဲ့ အပေါ်ပိုင်းဗလာနဲ့ လူလေးယောက် သည် ဒေါ်မွှေးမွှေးတို့ အိမ်ကြီးရဲ့ အနားကို ရောက်ရှိနေကြပြီ ။ သူတို့သည် သည်နေရာနဲ့ သိပ် မဝေးလှတဲ့ ကားလမ်းမကြီးရဲ့ ဘေးက “ လောင်ကွင်းရွာ” ကလူတွေ ဖြစ်သည် ။ ဆင်းရဲတွင်း နက်လွန်းလို့ စားစရာမရှိ ၀တ်စရာမရှိ နေစရာက မိုးမလုံတဲ့ ဘ၀မှာ မထူးဘူး ဆိုပြီး ကိုင်းခုတ် ဓါးလွတ် ကိုယ်စီ ဆွဲကိုင်ပြီး တွေ့ရ လုမည် ..ရရာတိုက်မည် ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ ထွက်လာကြသူတွေ ။ ဒီ တိုးမောင်း….အုန်းမောင်း..ငှက်ရိုးနဲ့ ပေတူး တို့သည် အချုပ်နဲ့ထောင်ကို အိမ်ဦးနဲ့ ကြမ်းပြင် ဆိုသလို အမြဲ ရောက်နေကြသူတွေ ဖြစ်သည် ။ သူတို့သည် ဓါးပြမှု အမှုတွဲ တတွဲထဲ နဲ့ ထောင်ထဲ ရောက်ခဲ့ပြီး လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ ပြန်လွတ်လာသူတွေ ဖြစ်သည် ။ “ ဟိတ်….ငှက်ရိုး….အိမ်ထဲမှာ လူရှိမယ်ကွ…ပြူတင်းပေါက်က ချောင်းကြည့်လိုက်စမ်း…..” “ အေးပါကွ..လခွီးမှာဘဲ ဆာလိုက်တာ ဘိုက်က တဂွီဂွီ မြည်နေတယ်……” လို့ ငှက်ရိုး ဆိုတဲ့လူက ပြောလိုက်ရင်း ပြူတင်းပေါက် နားကို တိုးကပ်သွားသည် ။ “ ဟာ….နှစ်ယောက် တယောက် လီးစုတ်..အဖုတ်ယက်တွေ လုပ်နေကြတယ်…..ဟိုက်..ဟိုတယောက်ကလည်း လက်ပြန်ကြိုး အတုပ်ခံထားရတယ်……ဘာတွေလဲ…..ဘာတွေ ဖြစ်နေလဲ……..” တိုးမောင်းတို့ လူစု ပြူတင်းပေါက်ကနေ ချောင်းကြည့်ပြီး အထဲက ကျွဲကြီး..ပြာဇင်..၀ါဇင်တို့ နဲ့ ကြိုးတုပ်ခံထား ရတဲ့ အောင်ကောင်းသော်ကို မြင်သည် ။ သူတို့သည် ကျော်ထဲနဲ့နော်ပိုး အတွဲကိုတော့ ကွယ်နေလို့ မမြင်ရကြ ။ ကားသည် တစတစနဲ့ နီးလာသည် ။ စောအားမေသည် လက်နှစ်ဖက်မြှောက်..ပါးစပ်ကလည်း တဟေးဟေး အော်ပြီး ကားကို တားသည် ။ တိုက်ချသွား မှာစိုးလို့ ရှေ့တည့်တည့်က မတား ။ လမ်းဘေးကနေ တားသည် ။
ကားကြီး ကျွိ….ကျွိ…….ဘရိတ်ဖမ်းသံနဲ့ ရပ်သွားသည် ။ “ ကယ်ကြပါအုံး….ဒုက္ခတွေ ရောက်နေလို့……..ဟင်…..ရဲတွေပါလား…….” “ ဦးလေးကြီး….ဘာတွေ ဖြစ်လာသလဲ…..” တိုးမောင်း..အုန်းမောင်း..ငှက်ရိုးနဲ့ ပေတူးတို့ တယောက်ကို တယောက် ကြည့်လိုက်ကြသည် ။ အထဲမှာ ကောင်မလေး နှစ်ယောက်နဲ့ ထင်တိုင်းကျဲနေတဲ့ လူထွားကောင်ကြီးနဲ့ ကြိုးတုပ်ခံထားရတဲ့ သွေးတွေ ပေလူးနေတဲ့ ငတိတကောင်ဘဲ ဆိုတော့ သူတို့က လေးယောက် ။ အထဲ ၀င်ကြရုံဘဲ ။ လူထွားကောင်မဲကြီးကို ဖနောင့်နဲ့ပေါက် ကောင်မလေးတွေကို တက်လိုး…..စားစရာသောက်စရာ ရှာစားကြဖို့ သူတို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြသည် ။ အိမ်နောက်ဖေး ဖက်ကို သူတို့ ရောက်သွားပြီး တံခါးပေါက် ကနေ အိမ်ထဲကို ၀င်ဖို့လုပ်တော့ တံခါးပေါက်က သော့ဖျက်ထားပြီးသား ဖြစ်နေတာ တွေ့ရလို့ အခက်အခဲ မရှိဘဲ သူတို့ အိမ်ထဲကို ရောက်သွားကြသည် ။ လူမဲထွားကြီး ကောင်မလေးတွေနဲ့ ပျော်ပါး နေတဲ့ထမင်းစားခန်းနဲ့ ဧည့်ခန်းကြား နေရာလေးကို သူတို့ ဓါးတွေ ကိုင်ထားရင်း သွားလိုက်ကြတဲ့အခါ သူတို့ ထင်မထားတာတွေ ဖြစ်ကုန်သည် ။ ကျွဲကြီးသည် အိမ်နောက်ဖေးဖက်က အသံတွေ ကြားတာနဲ့ ပြာဇင်နဲ့ ၀ါဇင်တို့ကို တိုးဖယ်ပစ်လိုက်ပြီး သူ နံရံမှာ ထောင်ထားတဲ့ ရိုင်ဖယ်ကို ပြေးဆွဲလိုက်သည် ။ ထို့အတူဘဲ နော်ပိုးကို တအား တက်လိုးနေတဲ့ ကျော်ထဲ ကလည်း ဖျတ်ကနဲ နော်ပိုး စောက်ဖုတ်ထဲက လီးကို ဆွဲနုတ်လိုက်ပြီး ပုဆိုးကို ကောက်စည်း စားပွဲပေါ် ချထားတဲ့ ၃၈ဘို့ ခြောက်လုံးပြူးကို ကောက်ကိုင်လိုက်သည် ။
တိုးမောင်း..အုန်းမောင်း..ငှက်ရိုးနဲ့ ပေတိုး တို့လည်း သူတို့ကို ရိုင်ဖယ်နဲ့ ချိန်ရင်း စောင့်နေတဲ့ လူထွားမဲကြီးနဲ့ ခြောက်လုံးပြူးနဲ့ ချိန်ထားတဲ့ လူပိန်သေးသေး တယောက်ကို ရုတ်တရက် တွေ့လိုက် ရလို့ ဘာလုပ်ရမှန်း မသိကြဘဲ ကြောင်အန်းအန်းတွေ ဖြစ်သွားကြသည် ။ “ ဟေ့ကောင်တွေ..မင်းတို့ ဘာကောင်တွေလဲ..ဘာလာလုပ်တာလဲ..သေချင်သလား..လက်ထဲက ဓါးတွေကို ချလိုက်…..” ကျွဲကြီးက ရိုင်ဖယ်နဲ့ ချိန်ထားရင်း အော်ပြောလိုက်သလို ကျော်ထဲကလည်း ခြောက်လုံးပြူးနဲ့ ချိန်ရင်း…“ ဓါးတွေ ချလိုက်..ပစ်ထည့်လိုက်ရမလား…” လို့ အော်လိုက်သည် ။ တိုးမောင်းတို့သည် သူတို့ ဓါးပြတိုက်စားလာတဲ့ သက်တမ်း တလျှောက် ဓါးကိုဘဲ ကိုင်ဘူးသူတွေ ဖြစ်သည် ။ ဓါးတောင် ကောင်းကောင်း ကန်းကန်း ဓါး မဟုတ် ။ သေနတ်နှစ်လက်နဲ့ ချိန်ထားတာ ခံရလို့ အတော့်ကို ဖြုန်သွားကြပြီး တိုးမောင်း အုန်းမောင်းနဲ့ ပေတိုးတို့က သူတို့ရဲ့ လက်တွေထဲက ကိုင်းခုတ်ဓါးတွေကို ကြမ်းပေါ်ကို လွှတ်ချလိုက်ကြသည် ။ သို့ပေမယ့် သူတို့လေးယောက်ထဲမှာ အမိုက်ကန်းဆုံး ဖြစ်တဲ့ ငှက်ရိုး ဆိုတဲ့ကောင်က မိုက်မိုက်ကန်းကန်း လုပ်လိုက်သည် ။ ကွဲကြီးနဲ့ ကျော်ထဲတို့ ဆီကို ဓါးနဲ့ ပြေးဝင်ပြီး ခုတ်ဖို့ ကြိုးစားလိုက်သည် ။ ဒိန်း…… ကျယ်လောင်တဲ့ ကော်ဒိုက်ယမ်း ပေါက်ကွဲသံ …။ ငှက်ရိုးရဲ့ လည်ပင်းသည် သွေးတွေ ဒလဟော ပန်းထွက်နေတာကို တွေ့လိုက်ကြရပြီး ငှက်ရိုး အရုပ်ကြိုးပြတ် ဘုံးကနဲ လဲကျသွားသည် ။ ပစ်လိုက်သူက ကျော်ထဲနဲ့ ကျွဲကြီး တို့ မဟုတ်ဘူး ။ အောင်ကောင်းသော်ဆီက ရထားတဲ့ ခြောက်လုံးပြူးနဲ့ ပစ်လိုက်တဲ့ မောင်မောင်မျိုးလင်း ။
“ ဘယ်လိုလဲ ရောင်းရင်းတို့ရဲ့…..လက်မနှေးနဲ့လေ ….ပစ်စရာ ရှိရင် အဲလို ပစ်ပလိုက်ရတယ်…..ဟင်းဟင်း…….” တိုက်မောင်းတို့ အရမ်းကို လန့်သွားသည် ။ သူတို့လူ ငှက်ရိုးတယောက် သွေးအိုင်ထဲမှာ အသက်ပျောက်နေပြီလေ ….။ ကျွဲကြီးက တိုက်မောင်းတို့ကို ကြမ်းပြင်မှာ ဒူးထောက် ထိုင်ခိုင်းလိုက်သည် ။ ဒေါ်မွှေးမွှေးသည် ကိုယ်တုံးလုံး ကြိုးတုပ် ခံထားနေရသည် ။ မောင်မောင်မျိုးလင်းသည် ဒေါ်မွှေးမွှေးရဲ့ ဖင်ကို လိုးနေရာက အသံဘလံတွေကြောင့် အလိုး ရပ်လိုက်ပြီး ဒေါ်မွှေးမွှေးကို ကြိုးပြန်တုပ်… သေနတ်ကို ဆွဲပြီး အပြင်ခန်းကို ထွက်သွားသည် ။ ကျွဲကြီးနဲ့ ကျော်ထဲတို့ အိမ် အနောက်ဖက်က ၀င်လာတဲ့ တိုက်မောင်းတို့ လူစုကို သေနတ်နဲ့ ချိန် ရင်ဆိုင်နေခိုက် ပြာဇင်..၀ါဇင်နဲ့ နော်ပိုးတို့ အ၀တ်အစားတွေ ပြန်ဝတ်ကြပြီး အခန်းထောင့်မှာ အသာငြိမ်နေခိုက် မောင်မောင်မျိုးလင်း အောက်ဖပ်က အိပ်ခန်းထဲက သေနတ်ကြီးနဲ့ ထွက်လာတာကို တွေ့လိုက်ကြရသည် ။ မောင်မောင်မျိုးလင်းက တိုက်မောင်းတို့ လူစုကို မဲနေလို့ ပြာဇင်တို့ သုံးယောက်ကို မမြင် ။ သေနတ်သံ ဒိန်းကနဲ ကြားလိုက်ရတဲ့ အချိန် ပြာဇင်တို့သည် အိပ်ခန်းထဲကို ပြေးဝင်လိုက်ကြတဲ့အချိန် ကိုယ်တုံးလုံးနဲ့ ကြိုးတုပ် ခံထားရတဲ့ သူတို့အမေ ဒေါ်မွှေးမွှေးကို တွေ့လိုက်ရသည် ။
“ ဟယ်..မာမီ…..” “ သမီးတို့..မာမီ့ကို ကြိုး ဖြေပေးကြ…မြန်မြန် …..” ပြေဇင်က ဒေါ်မွှေးမွှေးကို ကြိုးဖြေပေးနေတဲ့ အချိန် ၀ါဇင်က “ မာမီ..မာမီ့ကို သူတို့ ဟိုဟာ လုပ်ကြလားဟင်…..” လို့ မေးလိုက်သည် ။ ဒေါ်မွှေးမွှေးက ဖြေရခက်တာကြောင့် ..မဖြေချင်တာကြောင့်.. “ ဘာတွေ မေးနေတာလဲ..ဒို့ ထွက်ပြေးနိုင်ဖို့က အရေးကြီးတယ်….” လို့ ခပ်ငေါက်ငေါက် ပြောလိုက်သည် ။ ၀ါဇင်က “ ဟိုမဲမဲကောင်ကြီးက မီးတို့ကို စုတ်ခိုင်းတယ်…..နော်ပိုးကိုတော့ ဟိုပိန်ပိန် ကောင်က လုပ်တယ်…” လို့ ဆက်ပြောလိုက်သည် ။ နော်ပိုးက “ နောက်ထပ် လူဆိုးတွေ ရောက်လာပြီး သူတို့ထဲက တယောက်က သေနတ်နဲ့ ပစ်လိုက်တယ် ထင်တယ်…..” လို့ ပြောသည် ။ ဒေါ်မွှေးမွှေးလည်း အ၀တ်တွေ အမြန် ပြန်ဝတ်လိုက်ပြီး အိမ်ထဲကနေ အမြန်ဆုံး ထွက်ပြေးနိုင်ဖို့ လုပ်ရမည်မို့ ပြူတင်းပေါက်က ထွက်ပြေးကြဖို့ ကြိုးစားတော့သည် ။ စခန်းမှူးဦးအောင်မြသာသည် မိုးရေတွေ ရွှဲရွှဲစိုပြီး တုန်တုန်ရီရီနဲ့ သူတို့ကားကို တားတဲ့ အဖိုးကြီး ပြောတာတွေကို သေသေချာချာ နားထောင်နေသည် ။ သူတို့ ရှာနေတဲ့ လွတ်ပြေးသွားတဲ့ အချုပ်သားတွေသည် သည် စောအားမေ ဆိုတဲ့ စစ်သားဟောင်းကြီး အလုပ်လုပ်တဲ့ တရားရုံးက ဆွဲချအစိုးရ ရှေ့နေ ဒေါ်မွှေးမွှေးနဲ့ ဗိုလ်မှူးဇင်မောင်သိန်း တို့၇ဲ့ ခြံထဲ အိမ်ထဲကို ရောက်နေကြသည် ဆိုတာကို သိလိုက်ရတာနဲ့ သည်နေရာကို စောအားမေကို လိုက်ပြခိုင်းသည် ။ တခြား အဖွဲ့တွေကိုလည်း ဒေါ်မွှေးမွှေးတို့ ခြံကို သူတို့ သွားနေပြီ ဆိုတာကို စက်နဲ့လှမ်း အကြောင်းကြားလိုက်သည် ။ လွတ်ပြေးသွားတဲ့ မုဒိန်းကောင် အချုပ်သားတွေသည် လူသတ်ဖို့ကို ၀န်လေးသူတွေ မဟုတ်တဲ့အပြင် အချုပ်ကားစောင့် ရဲတွေ ဆီက သေနတ်တွေလည်း ရသွားကြလို့ အလွယ်တကူ ကြက်ကလေးငှက်ကလေး သွားဖမ်း သလို ရမှာ မဟုတ်ဘူး ။
သူသေကိုယ်သေ ပစ်လားခတ်လားတွေ ဖြစ်တော့မှာက သေချာနေသည် ။ အဲဒီ ခြံအထိ ကားသွားလို့ ရသည် လို့ စောအားမေ က ပြောပြပေမယ့် ကားစက်သံနဲ့ ကားမီးရောင်ကြောင့် လူဆိုးကောင်တွေက သူတို့ လာနေတာကို ကြိုသိသွားမှာ စိုးလို့ ကားနဲ့ မသွားဘဲ ခြေလျင် သွားကြဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီး သူ့လူတွေကို အခြေအနေကို ရှင်းပြလိုက်သည် ။ သူ့ကို သူ့အထက်က ရဲမှူးကြီးကလည်း စက်နဲ့ ပြန်ခေါ်ပြီး “ ပစ်မိန့် ” ပေးလိုက်လို့ သူ့လူတွေကို အချုပ်သား လူဆိုး မုဒိန်းကောင်တွေကို ပစ်ဖမ်းနိုင်ကြောင်း ခုခံရင် ပစ်ဖို့ မှာကြားလိုက်ပြီး စောအားမေကို ရှေ့က ထားပြီး ဒေါ်မွှေးမွှေးတို့ ခြံဆီကို ချဉ်းကပ်သွားကြသည် ။ ခြံနားကို နီးကပ်လာကြတဲ့ အချိန်မှာ သူတို့ရဲ့ သေနတ်တွေကို အသင့် အနေအထားနဲ့ ကိုင်ရင်း လူဖြန့်လိုက်ကြသည် ။ ဒိန်း… ရုတ်တရက် ကျယ်လောင်တဲ့ သေနတ်သံ တချက် အိမ်ကြီးဆီက ကြားလိုက်ရသည် ။ စောအားမေသည် “ ဘုရား..ဘုရား…ဆရာမတို့ကို ရန်မူပြီလား…..လုပ်ပါအုံး ဆရာတို့ရယ်…..” လို့ တုန်လှုပ်စွာနဲ့ ပြောလိုက်သည် ။ စခန်းမှူး ဦးအောင်မြသာလည်း လူဆိုးတွေ ဖက်က သေနတ်သုံးလိုက်တာကို သိလိုက်ရလို့ စိတ်တွေ လှုပ်ရှားသွားပြီး သူ့သေနတ်ကို အဆင်သင့် ထိုးချိန်ရင်း မောင်းပြန် စတင်း သေနတ်ကိုင် ရဲသားကို သူ့အရှေ့ကနေ သွားခိုင်းလိုက်သည် ။ “ဆန်းမြင့်ဝင်း…ကိုယ်က လက်ဦး ပစေကွာ..ဆော်သာဆော်..” လို့လည်း ပြောလိုက်သည် ။ သည် အချိန်မှာ အိမ်ကြီးထဲမှာ…. ကျော်ထဲ..ကျွဲကြီး ..မောင်မောင်မျိုးလင်းတို့က နောက်မှ ၀င်လာတဲ့ ဓါးကိုင် တိုးမောင်းတို့ လူစုကို သေနတ်နဲ့ ချိန်ထားပြီး ဒူးထောက်ခိုင်းထားနေတဲ့ အချိန် ..။
ဓါးနဲ့ ပြေး ခုတ်ဖို့ လုပ်တဲ့ ငှက်ရိုး ဆိုတဲ့ကောင်ကတော့ ပွဲချင်းပြီးနေပြီ ။ ကြမ်းပြင်မှာ ကားရားကြီး သွေးအိုင်ထဲ အသက်ပျောက်နေပြီ ။ မောင်မောင်မျိုးလင်းက လက်ပြန်ကြိုး တုပ်ခံထားရတဲ့ အောင်ကောင်းသော်ရဲ့ ကြိုးတွေကို သူ့ခါးမှာ ထိုးထားတဲ့ မီးဖိုချောင်သုံး သားလှီးဓါးနဲ့ ဖြတ်တောက် ပေးလိုက်သည် ။ ဒီကောင့်ကို အသုံးချ ခိုင်းလို့ ရအောင်….။ ကျော်ထဲက “ သေနတ်သံကြောင့် သည်ကို ရဲတွေ ရောက်လာနိုင်တယ်….ငါတို့ သည်နေရာက ခွာကြရင် ကောင်းမယ်…..” လို့ ပြောလိုက်တော့ မောင်မောင်မျိုးလင်းက “ သေချာတာပေါ့…. ကရင်လေး….ဒီပုလိပ်ကောင်ရဲ့ ကားက ခြံအနောက်ဖက်က ခြုံတွေ အကွယ်မှာ ရပ်ထားတာ…စောစောက ငါ သူ့ကို စစ်မေးထားလို့ သိတယ်…အဲဒီကားနဲ့ ဒို့ ပြေးကြမလား…” လို့ ပြောလိုက်သည် ။ ကျွဲကြီးက “ ဟိတ်ကောင်..လူတတ် မလုပ်နဲ့ …ကားနဲ့ ပြေးလို့ ရမလား..မင်းဘိုးအေ..ရဲတွေက ကားလမ်းမှာ တပုံတခေါင်း ရှိနေမှာ မင်း နားမလည်ဘူးလား..ချီးဘရိန်းရဲ့…..” လို့ လှမ်းဟောက်လိုက်ရင်း….တိုက်မောင်းတို့ကို သေနတ်ပြောင်းနဲ့ ထိုးပြရင်း..“ ဒီမအေပေးတွေကို ဘယ်လို လုပ်ကြမလဲ…ရှင်းပစ်လိုက်မလား……” လို့ မေးလိုက်သည် ။ ကျော်ထဲက “ သတ်ပစ်ရင်လည်း သေနတ်တော့ မသုံးနဲ့တော့…မျိုးလင်း..မင်းကိုင်ထားတဲ့ ဓါးနဲ့ဘဲ အသံတိတ် လည်လှီး သတ်လိုက်ကွာ….” လို့ ပြောလိုက်သည် ။ သူတို့ကို လည်လှီးသတ်ဖို့ ပြောနေလို့ ဒူးထောက် ထိုင်နေရတဲ့ တိုက်မောင်း..အုန်းမောင်းနဲ့ ပေတိုးတို့ အရမ်းကို ခြောက်ခြားသွားကြသည် ။ သည် အချိန်မှာ ကျွဲကြီးက ပြူတင်းပေါက်ကနေ အပြင်ဖက်မှာ လူရိပ် မြင်တယ် ဆိုပြီး မီးဖိုချောင် ဖက်ကို ရိုင်ဖယ်ကြီးကိုင်ရင်း ပြေးသွားသည် ။
အနောက်ဖက် တံခါးကနေ ပြေးထွက်သွားသည် ။ ကျော်ထဲက ပြူတင်းပေါက်ကနေ အပြင်ကို ကြည့်သည် ။ “ ဟင်..ကောင်မတွေ ပြေးကုန်ပြီ…..” ကျော်ထဲရဲ့ အော်သံကြောင့် မောင်မောင်မျိုးလင်းလည်း ပြာသွားသည် ။ ဒေါ်မွှေးမွှေးကို လက်လွှတ် ဆုံးရှုံး ရမှာကို နှမျောသွားသည် ။ သူကိုယ်တိုင်လည်း အုန်းမောင်းတို့ တိုက်မောင်းတို့ကို သေနတ်နဲ့ ချိန်ထားရလို့ မလိုက်နိုင် ။ “ ကရင်လေး..လိုက်…လိုက်…..လိုက် ဖမ်း……” လို့ အော်လိုက်သလို အောင်ကောင်းသော်ကိုလည်း အုန်း မောင်း တိုက်မောင်းနဲ့ ပေတိုးတို့ကို တခုခုနဲ့ တုပ်နှောင်ဖို့ ခိုင်းလိုက်သည် ။ အောင်ကောင်းသော်လည်း တုပ်ဖို့ ကြိုး မရှိတာနဲ့ တိုက်မောင်းတို့ ခါးက ပုဆိုးကို ချွတ်ခိုင်းပြီး ဆုပ်ဖြဲပြီး တုပ်ဖို့ လုပ်သည် ။ သည်ကောင်တွေက အောက်ခံဘောင်းဘီ ၀တ်တဲ့ကောင်တွေ မဟုတ်လို့ ပုဆိုး ချွတ်ခိုင်းလိုက်တဲ့ အခါ ဂွေးတန်းလန်းနဲ့ ဖြစ်ကုန်သည် ။ ဒေါ်မွှေးမွှေးသည် သမီးနှစ်ယောက်ရဲ့ လက်တွေကို ဆွဲကိုင်ပြီး နော်ပိုးနဲ့ အတူ အိမ်အနောက်ဖက်ကို ပြေးသည် ။ ဟိတ် ရပ် မပြေးနဲ့ ….. လူဆိုးတွေက မြင်သွားပုံရသည် ။ အနောက်ကနေ အော်ရင်း ပြေးလိုက်လာတာ တွေ့လိုက်ရသည် ။ မောင်မောင်မျိုးလင်းသည် စော်တွေဆီကို ကျွဲကြီးနဲ့ ကျော်ထဲတို့ ပြေးလိုက်သွားတာကို ပြူတင်းပေါက်ကနေ ကြည့်လိုက်တဲ့ အချိန် အောင်မောင်း..တိုက်မောင်းနဲ့ ပေတိုးတို့သည် မောင်မောင်မျိုးလင်းက သေနတ်နဲ့ ချိန်မထားတော့တာကို သိလိုက်ပြီး ပုဆိုးကို ဆွဲဖြဲ ပြီး ကြိုးအဖြစ် သုံးဖို့ လုပ်နေတဲ့ အောင်ကောင်းသော် ဆိုတဲ့ ကောင် ကလည်း ဘာလက်နက်မှ မရှိလို့ ခုခံဖို့ အချိန်ကောင်းဘဲ လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြသလို သူတို့ စောစောက လွှတ်ချထားတဲ့ ကြမ်းပေါ်ကဓါးတွေကို ကောက်ကိုင်လိုက်ကြပြီး အောင်ကောင်းသော်နဲ့ မောင်မောင်မျိုးလင်းတို့ကို ခုတ်ကြလေသည် ။
ပေတိုးက အောင်ကောင်းသော်ကို ၀င်ခုတ်သလို အုန်းမောင်းနဲ့ တိုက်မောင်းက မောင်မောင်မျိုးလင်းကို ၀င်ခုတ်ဖို့ ပြေးသွားသည် ။ မောင်မောင်မျိုးလင်းလည်း ဖျတ်ကနဲ လှည့်ပြီး သေနတ်နဲ့ ပစ်လိုက်သည် ။ ဒိန်းကနဲ အသံနဲ့ ခုတ်ဖို့ ဓါးကြီး မြှောက်ကိုင်ထားတဲ့ အုန်းမောင်း ခုတ်တဲ့ဆီကို မရောက်လိုက် ။ သူ့လက် လှုပ်ရှားမှု ထက် မြန်တဲ့ ကျည်ဆံက သူ့ခေါင်းကို ထိုးဖေါက်သွားသည် ။ သူ့ကိုယ်ကြီး ကြမ်းပြင်ပေါ်ကို ဖိုင်းကနဲ မထိတွေ့ ခင်မှာ သူ့အသက်က ပျောက်နေပြီ ။ တိုက်မောင်းသည် ရှေ့ဆက် မတိုးရဲတော့ ။ မောင်မောင်မျိုးလင်းက သူ့နဖူးတည့်တည့်ကို သေနတ်နဲ့ ထိုးချိန်ထားလို့ ။ “ ခွေးသား..ဓါးကို ချ….” ဒိန်း ….. အောင်ကောင်းသော်ကို ခုတ်ဖို့ လက်မြှောက်လိုက်တဲ့ ပေတိုးကို မောင်မောင်မျိုးလင်းက လှမ်းပစ်လိုက်တာ ။ ချက်ကောင်း မမှန်ပေမယ့် ပေတိုး ပုခုံးစွန်းကို ထိမှန်ပြီး ပေတိုး လက်ထဲက ဓါး လွတ်ကျသွားသလို နာနာကျည်းကျည်း အော်ရင်း ခုန်ဆွ ခုန်ဆွ ဖြစ်နေသည် ။ မောင်မောင်မျိုးလင်းက ပေတိုးကို လက်သီးနဲ့ ပြေးထိုးသည် ။ ယမ်းခိုးတွေ ဝေနေသည် ။ အောင်ကောင်းသော်ရဲ့ လက်ချက်နဲ့ ပေတိုး လဲကျသွားသည် ။ အောင်ကောင်းသော်က ခြေထောက်နဲ့ ဆက်ကန်သည် ။ တိုက်မောင်းကို ပုဆိုးစနဲ့ လက်ပြန်တုပ်နှောင်ကြသည် ။ ခြံဝိုင်းထဲ ရောက်နေတဲ့ စခန်းမှူးဦးအောင်မြသာတို့ ရဲအဖွဲ့ဝင်တွေသည် နောက်ထပ် သေနတ်သံ ၂ချက်ကြောင့် အိမ်နားကို မကပ်ရဲဘဲ နေရာယူပြီး စောင့်ကြည့်နေတုံး ခြံအနောက်ဖက်က သေနတ်သံ ၂ချက် ထပ် ကြားလိုက်ရပြန်သည် ။
“ ဘာဖြစ်လဲ…..ဘပု…ဘာဖြစ်လဲ……” ဦးအောင်မြသာက လမ်းလျှောက်စကားပြောစက်ကနေ မေးသည် ။ “ ကျနော်တို့ကို စပစ်လို့ ပြန်ပစ်တာ..လှကြိုင် ထိသွားတယ်..ဆရာ……” ရဲကြပ်ဘပုရဲ့ အသံက တုန်ခါနေသည် ။ ခြံအနောက်ဖက်က ၀ိုင်းဖို့ သွားတဲ့ ရဲအဖွဲ့ဝင်တချို့နဲ့ ပစ်ခတ်မှုတွေ ဖြစ်တာ ။ သေနတ်သံတွေ တဒိန်းဒိန်း ထပ် ကြားလိုက်ရပြန်သည် ။ စခန်းမှူးဦးအောင်မြသာတို့ သေနတ်သံ ကြားရတဲ့ ခြံအနောက်ဖက်ကို ပြေးသွားလိုက်ကြသည် ။ မောင်မောင်မျိုးလင်းက ရဲတွေ ခြံအနောက်ဖက်ကို ပြေးလိုက်သွားကြတာကို အခွင့်ကောင်း ယူပြီး အိမ်ရှေ့ပေါက်ကနေ ပြေးသည် ။ အောင်ကောင်းသော်လည်း မောင်မောင်မျိုးလင်းရဲ့ လက်ထဲမှာ သေနတ် ရှိတာကြောင့် အနောက်က မလိုက်ရဲဘူး ။ မောင်မောင်မျိုးလင်း ပြေးထွက်လာတာကို အိမ်ရှေ့တနေရာမှာ ရှိနေတဲ့ ခြံစောင့်ကြီးစောအားမေက တွေ့လိုက်လို့..“ ဒီမှာ ပြေးပြီ တယောက်…..ဒီမှာ..ဒီမှာ…….လာဖမ်းကြ….” လို့ အော်သည် ။ မောင်မောင်မျိုးလင်းက သွေးရူးသွေးတန်း ပြေးနေရာက စောအားမေ ကို သေနတ်နဲ့ လှည့်ပစ်သည် ။ ဖထီးစောအားမေကို မထိ ။ သို့ပေမယ့် ရဲတယောက် သူပြေးသွားတဲ့ ဖက်ကနေ ဗြုံးကနဲ ပေါ်လာပြီး သူ့ကိုရိုင်ဖယ်နဲ့ ပစ်ထည့်သည် ။ မောင်မောင်မျိုးလင်း ခေါင်းကိုထိသွားပြီး လဲကျသွားသည် ။ အောင်ကောင်းသော်လည်း အိမ်ထဲက ပြေးထွက်လာသည် ။ မောင်မောင်မျိုးလင်းကို ပစ်ချလိုက်တဲ့ ရဲသားက အောင်ကောင်းသော်ကို ရုတ်တရက် မမှတ်မိဘဲ သေနတ်နဲ့ ထိုးချိန်လိုက်သည် ။
“ ဟေ့…ရပ်…..မလှုပ်နဲ့….” အောင်ကောင်းသော်က လက်နှစ်ဖက် မြှောက်ရင်း…“ ငါ..တရားရုံးက ဒုရဲအုပ်…..ကွ..” လို့ အော်ပြောလိုက်တော့ ရဲသားလည်း သေသေချာချာ ကြည့်ပြီး အောင်ကောင်းသော်ကို မှတ်မိသွားသည် ။ “ ဟာ..ဆရာ..ဆရာက သွေးတွေ ပေလူးနေလို့ ရုတ်တရက် မမှတ်မိဘူး….” လို့ ပြောသည် ။ စခန်းမှူး ဦးအောင်မြသာ တို့ အဖွဲ့ အိမ်နောက်ဖေးကို ရောက်သွားချိန် သူ့တပည့်တချို့ သေနတ်ထိမှန် လဲကျနေတာကို တွေ့လိုက်ရသလို ရဲကြပ်ဘပုနဲ့ အဖွဲ့က ပစ်ခတ်လို့ သေနေတဲ့ လူဆိုးနှစ်ကောင်ကို တုံးလုံး ပက်လက် တွေ့လိုက်ကြရသည် ။ ရဲကြပ်ဘပုက “ ကျနော်တို့နဲ့ အနီးကပ် ပစ်ကြတာ..ကျနော်တို့လူ နှစ်ယောက်….လှကြိုင်နဲ့ မောင်မောင်ဆန်း ထိသွားပြီး သူတို့နှစ်ယောက်လည်း ပွဲချင်းပြီးဘဲ ဆရာ…..” လို့ သတင်းပို့သည် ။ အိမ်ရှင် ဒေါ်မွှေးမွှေး…သမီးနှစ်ယောက်နဲ့ အိမ်ဖေါ်မလေး တို့က ရဲတွေနဲ့ ကျွဲကြီး….ကျော်ထဲတို့ ရင်ဆိုင် ပစ်ခတ်ကြတဲ့ အချိန်မှာ မြေကြီး ပေါ်မှာ မှောက်အိပ်နေခဲ့ကြလို့ အထိအခိုက် မရှိကြဘူး လို့လည်း ရဲကြပ် ဘပုက သတင်းပို့သည် ။ ညသည် ခဲယဉ်းစွာနဲ့ ကုန်ဆုံးသွားပြီးနောက် မနက် မိုးသောက်တော့မည် ။ ဒေါ်မွှေးမွှေး အိမ်ထဲကို ၀င်ရောက်ပြီး အကြမ်းဖက် စီးနင်းထားတဲ့ မုဒိန်းမှု တရားခံပြေးတွေသည် မရှုမလှ သေပွဲ ၀င်ကုန်ကြပြီ ။ ဒေါ်မွှေးမွှေးရဲ့ ဧည့်ခန်းထဲမှာ ရဲတပ်ဖွဲ့က အကြီးအကဲတွေနဲ့ မြို့နယ်နဲ့ တိုင်းက အုပ်ချုပ်မှု အကြီးအကဲတွေ အ ကုန် ရောက်ရှိနေကြသည် ။ သူတို့ ရောက်မလာကြခင်ထဲက စခန်းမှူးဦးအောင်မြသာသည် ဒေါ်မွှေးမွှေး..သမီးငယ် နှစ်ယောက်နဲ့ အိမ်ဖေါ်မ လေး တို့ကို ဖြစ်ပျက်သမျှတွေကို ပြောပြဖို့ မေးသည် ။ သူတို့က လူဆိုးတွေသည် မီးဖို အနောက်ခန်းက တံခါးကို ချိုးဖျက်ပြီး ၀င်လာကြသည် ….စားစရာ တောင်းစားကြသည် …မနက်အထိ သည်အိမ်ထဲမှာ ခိုအောင်း နေကြမည်…လမ်းစားရိတ်အဖြစ် ငွေလိုတာမို့ ငွေ ထုတ်ပေးဖို့ တောင်းကြသည် လို့ ပြောပြ ကြသည် ။ “ အမကြီးတို့ကို ကိုယ်ထိလက်ရောက် လုပ်တာ ရှိသလား…” လို့ မေးတဲ့အခါ ပါးတချက်နှစ်ချက်လောက် အရိုက် ခံရသည် လို့ ဖြေသည် ။
စခန်းမှူးဦးအောင်မြသာသည် ဒေါ်မွှေးမွှေးရဲ့ အဖြေကို သိပ် ဘ၀င်မကျလှလို့ သမီး နှစ်ယောက်နဲ့ အိမ်ဖေါ်နော်ပိုးကို မေးသည် ။ သူတို့ကလည်း လူဆိုးကြီးတွေက ပါးရိုက်တယ်..တွန်းတယ်..လို့ဘဲ ဖြေသည် ။ ကိုယ်ထိလက်ရောက် ကျူးလွန် စော်ကားတာတွေ ရှိသလား…အထပ်ထပ် မေးပေမယ့် ဘာမှ လုပ် တယ်လို့ မဖြေကြဘူး ။ စခန်းမှူးဦးအောင်မြသာသည် ဒုရဲအုပ်အောင်ကောင်းသော်သည် ဒေါ်မွှေးမွှေးရဲ့ အိမ်မှာ ရောက်နေတာကို နားမလည် ဘ၀င်မကျဘူး ။ “ ခင်ဗျား…ဘယ်လို ရောက်နေတာလဲ..” လို့ မေးတဲ့အခါ အောင်ကောင်းသော်ရဲ့ အဖြေက မရေမရာနဲ့ ။ အချုပ်ကား မှောက်ပြီး ရောက်လာတဲ့ ကျွဲကြီးတို့တတွေက သူ့ကို ဖမ်းပြီး နှိပ်စက်လို့ တကိုယ်လုံး ဒါဏ်ရာတွေ ရတဲ့အကြောင်း အောင်ကောင်းသော်က ပြောသည် ။ ဘာကြောင့် သည် မြို့စွန်က ဒေါ်မွှေးမွှေး ခြံထဲကို ခင်ဗျား ရောက်နေတာလည်း လို့ မေးတဲ့အခါ “ ကျနော် တ ဖက်မြို့ကို အသွား လူတစု သည်ဖက်ကို သေနတ်တွေကိုင်လျက်နဲ့ သွားနေကြတာ တွေ့လိုက်လို့ အနောက်က လိုက်ကြည့်လို့ပါ…” လို့ ဖြေသည် ။ “ ခင်ဗျားက ဒါ ဒေါ်မွှေးမွှေးတို့ အိမ် ဆိုတာကို မသိဘဲ သည်အိမ်ဆီကို ရောက်လာတာလား..” လို့ မေးတော့ “ ဟုတ်ပါတယ်…” လို့ ဖြေသည် ။ စခန်းမှူးဦးအောင်မြသာသည် သူ့ကို မသင်္ကာဘူး ။ သည်လူ တခုခုတော့ တခုခုဘဲလို့ တွေးနေသည် ။ ကျွဲကြီး….ကျော်ထဲနဲ့ မောင်မောင်မျိုးလင်းတို့ အားလုံး ရဲတွေနဲ့ ပစ်ခတ်လို့ ပွဲချင်းပြီး သေဆုံးကုန်သည် ဆိုတော့ ဒေါ်မွှေးမွှေး..၀ါဇင်..ပြာဇင်တို့..နော်ပိုးတို့သည် သူတို့ကို လူဆိုးတွေက မုဒိန်းကျင့် အကြမ်းဖက်ကြတာကို မပြော ကြတော့ ။ ပြောလို့ တရားရုံးမှာ ထွက်ဆိုကြရရင် လူကြားထဲ အရှက်တကွဲ ဖြစ်ကြရမည် မဟုတ်လား ။
နောက်မှ အိမ်ဆီကို ရောက်လာတဲ့ ဓါးကိုင် အုန်းမောင်း တိုက်မောင်း ပေတိုးတို့သည် ကောင်မလေး နှစ်ယောက်က ကျွဲကြီးကိုလီးစုတ်ပေးနေကြရတာကို ပြူတင်းပေါက်က မြင်ခဲ့ကြသည် ။ သို့ပေမယ့် သည်နှစ်ယောက် အနက် ပေတိုးကလည်း ပုခုံးကို သေနတ် ထိထားတာကြောင့် သွေးလွန်လို့ ဆေးရုံကို အမြန် ပို့လိုက်ရသည် ။ မသေဘဲ ကြိုးတုပ်ခံထားရတဲ့ တိုက်မောင်းကို ရဲတွေက အဖက်လုပ်ပြီး မိန်းမတွေကို ကျွဲကြီး တို့က မုဒိန်းကျင့်ကြသလား ဆိုတာကို မမေးကြ ။ အောင်ကောင်းသော်သည် ၀ါဇင်ပြာဇင်တို့ ညီအမတွေကို ကျွဲကြီး လီးစုတ်ခိုင်းတာ အဖုတ်ယက်တာတွေ အကုန် မြင်သည် ။ နော်ပိုးကို ကျော်ထဲ ရေရေလည်လည် လိုးတာလည်း မြင်သည် ။ သို့ပေမယ့် မိန်းမတွေ အားလုံးက သူတို့ ဘာမှ အလုပ်မခံရပါဘူး လို့ ထွက်ဆိုနေတော့ သူ ဘာမှ မပြောတော့ဘဲ အသာငြိမ်နေလိုက်သည် ။ သူကိုယ်တိုင်ကလည်း သည်အိမ်ကို ဘာကြောင့် ရောက်နေရသလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို ယုတ္တိရှိအောင် မဖြေနိုင် ဘူးလေ ။ လူမဆန်အောင် မုဒိန်းကျင့် လူသတ်ခဲ့ကြတဲ့ မုဒိန်းကောင်တွေသည် အသေဆိုးနဲ့ အားလုံး သေသွားကြရတာကို စခန်းမှူးဦးအောင်မြသာ ကြည့်ပြီး “ မကောင်းတဲ့ကောင်တွေဟာ သူတို့ လုပ်ခဲ့သလိုဘဲ ပြန် ခံသွားကြရတာ ဘဲကွာ…..” လို့ ညည်းသလို ပြောလိုက်လို့ သူ့တပည့် ရဲကြပ်ဘပုကလည်း “ ဟုတ်တယ်..ဆရာ…အချုပ်ကား မှောက်တော့ ဆရာမကို တက်ကျင့်ခဲ့တဲ့ ချစ်တိုင်းကောင်းနဲ့ ဖိုးကံကောင်း ဆိုတဲ့ နှစ်ယောက်လည်း ခြေထောက်တွေ အားလုံး ဖြတ်လိုက်ရတဲ့အထိ အခြေအနေ ဆိုးသွားတယ်..ဒါ ကံကြီးထိုက်တာဘဲ ဆရာ..ကိုယ့် ကို ပညာသင်ပေးတဲ့ မိဘနဲ့ တဂိုဏ်းထဲ ထားရမယ့် ဆရာသမားကို ကျူးလွန်စော်ကားတာလေ….” လို့ ၀င်ပြော လေသည် ။ မနက် ဆယ်နာရီတိတိ ။ ရဲတွေ အားလုံး ပြန်သွားကြပြီးတဲ့နောက် ဒေါ်မွှေးမွှေးနဲ့ ပြာဇင် ၀ါဇင် နော်ပိုးတို့သည် ရေချိုး သန့်စင်ပြီးကြပြီး သူတို့ အိပ်ခန်းတွေ အသီးသီးမှာ နားနေကြသည် ။
ဒေါ်မွှေးမွှေးသည် မောင်မောင်မျိုးလင်း တအား လိုးခဲ့တာတွေကြောင့် ယခုတိုင် ကျိန်းစပ် နာကျင်နေတဲ့ သူမရဲ့စောက်ဖုတ်နဲ့ စအိုပေါက်တို့ကို လက်နဲ့ စမ်းကြည့်နေရင်း မောင်မောင်မျိုးလင်း လိုးတာတွေ ယက်တာတွေကို သဘောကျ ကြိုက်ခဲ့တဲ့ သူမအဖြစ်ကို ပြန်တွေးနေမိသည် ။ ထို့အတူဘဲ ပြာဇင်နဲ့ ၀ါဇင်တို့သည် သူတို့ရဲ့ အိပ်ခန်းတွေ ထဲမှာ ကုတင်ပေါ် လှဲရင်း ကျွဲကြီးရဲ့ လီးကြီးကို စုတ်ပေးခဲ့ရတာတွေ..ကျွဲကြီးက သူတို့ရဲ့ အပျိုစင် နို့တွေကို ကောင်းကောင်း ဆုပ်နယ်ဖျစ်ညှစ်ခဲ့တာတွေ..နို့သီးလေး တွေကို စို့ခဲ့တာတွေ..သူတို့ စောက်ဖုတ်နဲ့ စအိုပေါက်တွေကို ယက်ခဲ့တာတွေ ကို ပြန်လည် တွေးတောနေမိကြပေသည် ။ ကျွဲကြီးရဲ့ အတင်းအကြပ် အဓမ္မ အနိုင်ကျင့်ပြီး ခိုင်းလို့ သူ့လီးမဲမဲကြီးကို စုတ်ပေး ယက်ပေးခဲ့ရပေမယ့် သူတို့အတွက် ပထမဆုံး အတွေ့အကြုံ ဖြစ်ပြီး ကျွဲကြီးက သူတို့စောက်ဖုတ်ကို ကောင်းကောင်း ဆွပေး နို့တွေ ကို နယ်ချေပေး..စို့ပေးပြီး နောက်ဆုံး စောက်ဖုတ်ကို လျာနဲ့ ကလိယက်ပေးတော့ သည် အထိအတွေ့တွေကို သဘောကျ သာယာသွားမိကြသည် ။ လူ့ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ ဆက်လက် နေကြရဦးမှာမို့ မုဒိန်းအကျင့်ခံရတယ် လို့ ထွက်ဆိုကြလို့ မ ဖြစ်ဘူး လို့ အမေဖြစ်သူ ဒေါ်မွှေးမွှေးက ပြောခဲ့လို့ ရဲတွေကို သူတို့ကို ဘာမှ အလုပ်မခံရပါဘူးလို့ဘဲ ထွက်ဆို ခဲ့ကြသည် ။ နော်ပိုးကတော့ သူမ ခိုက်သွားစွဲသွားရတဲ့ ကရင်လေး ကျော်ထဲကို သတိရ မြင်ယောင်ပြီး တရှုံ့ရှုံ့နဲ့ ငိုနေသည်။ ကျော်ထဲ ပေးသွားတဲ့ ဝေဒနာတွေက ခုထိ ခံစား သိရှိနေရတုံးဘဲလေ ။ တအား လိုးသွားလို့ စောက်ဖုတ်ရော ဖင်ပေါက်လေးရော တစစ်စစ်နဲ့ ကျိန်းစပ် နာကျင်နေဆဲဘဲ မဟုတ်လား ။
သည်ညမှာ ဒေါ်မွှေးမွှေးရဲ့ သမီးနှစ်ယောက်ကို ကျွဲကြီး စိမ်ပြေနပြေ လီးစုတ်ခိုင်းတာတွေ သူတို့ နို့တွေကို စို့တာကိုင်တာ တွေ..သူတို့ စောက်ဖုတ်တွေကို ယက်တာစုတ်တာတွေကို အနီးကပ် မြင်တွေ့ခဲ့ရသည် ။ နော်ပိုး ဆိုတဲ့ အိမ်ဖေါ်ကရင်မချောချောလေးကို မုဒိန်းကောင် ကျော်ထဲက စောက်ဖုတ်ကိုရော ဖင်ပေါက်ကိုရော လိုးခဲ့တာတွေကို သူ မြင်ခဲ့ရသည် ။ ဒါတွေကို ပြန်လည် တွေးတော မြင်ယောင်နေရင်း အောင်ကောင်းသော် တ ယောက် လီးကြီး မတ်မတ်ထောင် လာရသည် ။ တကယ်တော့ သူသည် သည် သားအမိတွေကို ကျင့်ချင်လို့ သည်အိမ်ကို မိုးထဲလေထဲ ရောက်သွားခဲ့တာပါ ။ သူက မကျင့်ရ မကျင့်ဖြစ်ဘဲ အချုပ်တရားခံပြေးတွေက အားရပါးရကြီး ကျင့်သွားခဲ့ကြသည် ။ သည် သားအမိနဲ့ အိမ်ဖေါ်မလေးသည် သူတို့ကို လူဆိုးကောင်တွေက ဘာမှ မလုပ်ဘူးလို့ ထွက်ဆိုသွားခဲ့ကြသည် ။ သူတို့တတွေနဲ့ မကြာခင် သည် ကိစ္စကို ဆွေးနွေးမည် လို့ အောင်ကောင်းသော် စဉ်းစားနေသည် ။ သည် အဖြစ်အပျက်တွေကို လူတကာကို ဖွင့်မပြောစေချင်ရင် သူ့ကိုလည်း ပေးလိုးဖို့ သူ တောင်းဆို အကြပ်ကိုင်မည် လို့ အကွက်ချကြည့်နေသည် ။ ပြီးပါပြီ
Previous Previous post: သဒ္ဒါလွန်တနှာကျွံ
Next Next post: ဘီလျံနာ ကိုကို